အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ဖို့နိဒါန်း - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ဖို့နိဒါန်း
ထင်နှင့် Destiny ရဲ့အခနျးငါ
ဒီပထမဦးဆုံးကျအခနျး စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny သငျသညျမှစာအုပ်နှင့်အတူဆကျဆံသောဘာသာရပ်များသာအနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များထဲကအတော်များများထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျထိုလူအပေါင်းတို့သည်စဉ်းစားဟန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအားပေးကွောငျးတှေ့နိုငျသညျ။ သင်အတွေးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာ, နှင့်စာအုပ်အားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းထင်သည့်အတိုင်း, သင်က ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, သင်ဘဝနှင့်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းကိုအချို့အခြေခံပေမယ့်တခါမျှလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အချက်အလက်များတစ်ဦးနားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ကြကြောင်းကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါစာအုပ်၏အသကျရှယျခကျြကရှင်းပြသည်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုကဒီမှာသို့မဟုတ်နောကျမှ, မျှသာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို "ကယ်တင်" ရန်မဟုတ်။ အသက်တာ၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်, အဓိပ္ပာယ်နှင့်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုလုံးကိုကျေနပ်လိမ့်မည်ဟုရည်ရွယ်ချက်, ဒီဖြစ်ပါသည်: ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီတစျခုသတိဖြစ်ခြင်းအစဉ်အမြင့်မားဒီဂရီအတွက်တဖြည်းဖြည်းသတိဖြစ်လိမ့်မည်ကို၎င်း, ကြောင်းနှင့်နှင့်မှတစ်ဆင့်နှင့်သဘာဝကျော်လွန်ပြီး, သဘောသဘာဝမသိဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအားဖြင့်သမျှသောတအာရုံကတဆင့်မသိစေနိုင်ပါတယ်ဆိုလို။
အဆိုပါစာအုပ်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် inhabits ကြောင်းကိုသင်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မိမိကိုယ်ကို: ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင် ပတ်သက်. သတင်းစကားတတ်၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲဖော်ထုတ်ပြီ သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရန်ကြိုးစားသောအခါနှင့်သင် သို့ဖြစ်. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ယန္တရား၏ထင်ပါတယ်။ အလေ့အထများ၏အင်အားခြင်းအားဖြင့်သင်သည် "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်" အဖြစ်, "ငါ" အဖြစ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြောပြီ။ "ငါသေတဲ့အခါမှာ" သင် "ငါမွေးဖွားခဲ့သည်သောအခါ" ကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများကိုသုံးစွဲဖို့လေ့ရှိသောနှင့်နေကြသည်; နှင့် "ငါဖန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမွငျလြှငျ" နှင့်အဖြစ်မှန်၌သငျတို့ပွောဆိုကြောင်းကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အခါ, ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ် "နှင့်ဒါအပေါ်" "ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အိပ်ပျော်" ။ သင်ပထမဦးဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင်တို့အထဲ၌အသက်ရှင်နေထိုင်ခန္ဓာကိုယ်အကြားခြားနားတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရန်။ သငျသညျအဖြစ်အလွယ်တကူသင်အသုံးပြုအဖြစ်ဟူသောဝေါဟာရကို "ငါ့ခန္ဓာကိုယ်" ကိုသုံးပါသောအချက်ကိုပဲကိုးကားသောသူတို့ကိုမဆိုငျသညျကိုလုံးဝပြေးလမ်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုမယ်လို့ ဤအရေးကြီးသောဂုဏ်ထူးစေ။
သင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသိသင့်; သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတျကွောငျးကိုသိသင့်ပါတယ်။ သင်ကစဉ်းစားသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကလေးဘဝ၌, သင်ပထမဦးဆုံးကမသိဖွစျလာတဲ့အခါ, ကဘာကနေယနေ့အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုသဘောပေါက်ကြောင့်သင်ဤကိုသိသင့်ပါတယ်။ ၎င်း၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များမှတဆင့်၎င်း၏သွားတာ၌၎င်း, င်း၏လက်ရှိအခွအေနေသို့, ကအလွန်ကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ: သင်ကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသောနှစ်အတွင်းမှာတော့သင်ကပြောင်းလဲနေတဲ့လျက်ရှိသည်ကိုသတိထားပါခဲ့ကြပြီ။ တဖန်သင်တို့အဖြစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိရင့်ကျက်ပြီအသိအမှတ်ပြုရန်ကမ္ဘာ၏သင့်ရဲ့အမြင်နှင့်ဘဝဆီသို့သင့်ရဲ့သဘောထားကိုအတွက်တဖြည်းဖြည်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ရပြီ။ ဒါပေမယ့်သင်ကကနျြရစျခဲ့ကြသည်ဤအပြောင်းအလဲများတစ်လျှောက်လုံး: သည်ကိုသင်အတူတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်မသိကွပွီဟုတူညီငါအပေါငျးတို့သနေစဉ်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားပေါ်တွင်သင်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသင်သည်ကျိန်းသေမဟုတ်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မဖွစျနိုငျကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သင့်အားနှိုးဆော်ခြင်း, မဟုတ်ဘဲ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်၌နထေိုငျတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရှိကြောင်း, သငျသညျ operating ဖြစ်ကြောင်းအသက်ရှင်သောသတ္တဝါသဘာဝယန္တရား; တစ်ဦးကိုသင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုတိရိစ္ဆာန်နဲ့မာစတာ။
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဤဤလောကသို့ကြွလာပုံကိုသိကြ၏ ဒါပေမယ့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သို့ကြွတော်မူပုံကိုသင်သိကြပါဘူး။ ကမွေးဖွားခဲ့သည်ပြီးနောက်အချို့ကိုသင်အချိန်တိုင်အောင်သို့မလာဘဲ, တစ်ဦးဖြစ်ကောင်းနှစ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာ; သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ရောက်လာသောပြီးမှသာစတင်ကြောင့်ဤအချက်ကို, သင်သည်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုမျှသင်တို့သိကြ၏။ သင်သည်သင်၏အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရေးစပ်ထားတဲ့များ၏ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုသိကြ၏ ဒါပေမယ့်သင်ကသင်မသိသောဖြစ်ကြောင်းသောအရာကို; သင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအဖြစ်သေးသတိမရှိကြပေ။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အခြားသူများ၏အလောင်းများကိုထံမှခွဲခြားသောအားဖွငျ့နာမညျကိုသိကြ၏ နှင့်ဤသင်သည်သင်၏နာမကိုအမှီအဖြစ်စဉ်းစားတတ်လာတယ်။ အဘယ်အရာကိုအရေးပါသည်သင်တစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူကား, သင်သိသင့်ကြောင်း, သည်မဟုတ်, သင်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်မသိ-တစ်ဦးချင်း, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်, အပြတ်အတောက်ဝိသေသလက္ခဏာအဖြစ်သေးသတိမတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်တော်မူသည်ကွောငျးသိရသငျတို့သအတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါကအသေခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား; ထိုသို့အသက်ရှင်သောလူ့ခန္ဓာကိုယ်အချိန်အတွက်ကွယ်လွန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအစအဦးရှိခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့အဆုံးသတ်ရပါလိမ့်မယ်; နှင့်စမှအဆုံးပါကပြောင်းလဲမှု၏, အချိန်များ၏ဖြစ်ရပ်များ၏ကမ္ဘာ၏ဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျ, သို့သော်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေသောဥပဒေများမှဘာသာရပ်တူညီသောလမ်း၌နေကြသည်မဟုတ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသင်ကဝတ်ဆင်ထားတဲ့နှင့်အတူဝတ်စုံပြောင်းလဲသွားထက်ကမကြာခဏရေးစပ်ထားတဲ့၏ပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲပေမယ့်, သင့်ရဲ့အထောက်အထားမပြောင်းပါဘူး။ သငျသညျအစဉျအမွဲသငျသညျတူညီကြသည်။
သင်သို့သော်သင်သည်ကွိုးစားအံ့သောငှါရှာတွေ့သောဤအမှန်တရားတွေသုံးသပ်သကဲ့သို့, သင်ကိုယ်သင်အစဉ်အဆက်, အဆုံးသတ်မှသင်ကိုယ်သင်အစဉ်အဆက်အစရှိသည်ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်ထက်မဆိုပိုပြီးလာကြလိမ့်မည်မထင်မမှတ်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့အထောက်အထား beginningless နှင့်အဆုံးမဲ့သောကွောငျ့ဤသည်ကား, အစစ်အမှန်ငါသည်သင့်ကိုခံစားရသောကိုယ်ပိုင်အစဉ်အမြဲအချိန်, သေမင်း၏ပြောင်းလဲမှု၏ဖြစ်ရပ်များ၏လက်လှမ်းမမီ, တဘက်, သနေိုငျနှင့် changeless ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤသည်သင်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဝိသေသလက္ခဏာသည်အဘယ်အရာကိုသင်မသိရပါဘူး။
သငျသညျ "? ငါဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်အရာကိုသိလား" ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးသည့်အခါသင့်ရဲ့အထောက်အထား၏ရှေ့မှောက်တွင်နောက်ဆုံးမှာသင်ဤအဖြစ်အချို့သောထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌ဖြေဆိုစေမည်: "ငါဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲငါကအနည်းဆုံးငါသိ၏ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရ; ။ ငါသတိဖြစ်ခြင်း၏အနည်းဆုံးသတိလည်းဖြစ်၏ "ထိုအခါဤအချက်ကိုကနေဆက်လက်သင်ပြောစေခြင်းငှါ:" ဒါကြောင့်ငါဖြစ်ကြောင်းကိုသိ၏ဖြစ်၏။ ငါဖြစ်ကြောင်းကို, ထိုမှတပါး, သတိဖြစ်၏ နှင့်ငါမှတပါးအခြားသောဖြစ်၏။ ကျွန်မမသိဖြစ်ကြောင်းကိုအခြားအရာအားလုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ဟန်သော်လည်းကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါ၏-ဒီကွဲပြားငါ-သမီးနှင့်ကိုယ်ပိုင်သတိဖြစ်ကြောင်းကိုဤအမှုသည်ငါ့ဝိသေသလက္ခဏာ, ငါ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပြောင်းခံစားရ-ပါဘူးကိုသိ၏ဖြစ်၏။ "ဒီကနေဆက်သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ:" ငါမရှိသေးပါဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မပြောင်းလဲတဲ့ငါကဘာလဲဆိုတာမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်မနိုးနာရီအတွင်းသတိဖြစ်ကြောင်းကိုအရာ၏ဤလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်, သတိတည်းဟူသောအရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးသတိဖြစ်၏ ခံစားရနှင့်အလိုရှိနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပေမယ့်မပြောင်းပါဘူးတစ်ခုခု; ပြုမူရန်ဤခန္ဓာကိုယ်အလိုတော်နှင့်အ impels တစ်ခုသတိတစ်ခုခု, သေးသိသာခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းနေသည်မှာထိုသို့သမျှဒီသတိတစ်ခုခု, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါပဲ။ "
ထို့ကြောင့်အတှေးအချေါ, သင်ကအမည်နှင့်အချို့နဲ့အခြားကွဲပြား features တွေဆောင်သောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကိုအဖြစ်မရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငဲ့ထံသို့လာကြ၏။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကိုအဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်ဤစာအုပ်ထဲတွင်ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်စာအုပ်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သည့်အတူဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်စာအုပ်ကိုဖတ်အဖြစ် သို့ဖြစ်. တစ်ခုခံပြီးပြုသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရန်, ကအထောကျအကူရှာတွေ့လိမ့်မည် လူသားတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်သနေိုငျပြုသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုရန်။ သင်တစ်ဦးပြုသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားတတ်ရန်သင်ယူအတိုင်း, သင်တို့၏ကိုယ်၌ပြုသောအဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင်၏နှင့်အခြားသူများ၏နက်နဲသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့အရေးပါသောခြေလှမ်းယူပြီးပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သတိထားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအာရုံအားဖွငျ့, သဘောသဘာဝကြောင်းတခြားအရာအားလုံးထက်၏။ ဒါဟာသင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မှာအားလုံးတတ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းအာရုံခံသာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အားဖွငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအတှေးအချေါလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။ သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်ရဲ့ခံစားမှုနှင့်သင့်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်သတိပေးခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ခံစားမှုနှင့်ခွေငျးငှာအလိုရှိသောနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုမန်နီးဖက်စ်သည်စဉ်းစားတွေးခေါ်; ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမျှသာသင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုဟူသောအသုံးအနှုနျး, အပြင်ပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အာရုံနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်, သင့်ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒတို့ကလှုံ့ဆျောသောယန္တရား, ထိုတူရိယာဖြစ်၏ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီသဘောသဘာဝစက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အာရုံသတ္တဝါဖြစ်၏ သဘာဝ-ကိစ္စ၏မမြင်ရတဲ့ယူနစ်; ဤအသင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာလှမျးမိုးပြံ့နှံ့ကြောင်းတပ်ဖွဲ့များ start; သူတို့သတိမရှိသောသော်လည်း, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်မသိသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အာရုံ, အစင်တာများအဖြစ်သဘာဝတရား၏အရာဝတ္ထုနှင့်သင် operating ဖြစ်ကြောင်းလူ့စက်အကြားတွေ့ကြုံ၏က transmitter ဝတ်ပြုကြလော့။ အဆိုပါအာရုံသင့်ရဲ့တရားရုံးသဘောသဘာဝရဲ့သံတမန်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏အာရုံဆန္ဒအလျောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတန်ခိုးမရှိ; သင့်ရဲ့သင်ခံစားမိနိုင်ကြသည်ဖြစ်သောမှတဆင့်လက်အိတ်နှင့်လုပ်ရပ်ထက်ပိုမပါ။ အဲဒီအစား, အဲဒီပါဝါကိုသငျသညျ, အအော်ပရေတာ, အသတိမိမိကိုယ်ကို, အခံပြီးပြုသောဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျမရှိပဲ, ပြုသော, စက်ဘာမှပြီးမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်-အဆောက်အဦး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, တစ်သျှူးပြုပြင်, ထိုသို့အဘို့နှင့်ပြောင်းလဲမှု၏အကြီးအသဘောသဘာဝစက်နှင့် တွဲဖက်. လည်ပတ်သောသကဲ့သို့ဘွား-နေသောလူတစ်ဦးချင်းစီအသက်ရှူစက်အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ပေါ်သယ်ဆောင်၏အလုပ်၏အတင်းအဓမ္မလှုပ်ရှားမှုများ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘောသဘာဝဒီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့သည်ညီမျှမှုနှင့်မမှန်အတှေးအချေါ, သို့သော်, အတူဝငျရောကျစှကျခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်: အလုပ်မရရှိသေးနှငျ့သငျအဖျက်များနှင့်သည်ညီမျှမှုကိုယ်ထင်ရှားတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်စေသောဒီဂရီမှပယ်ဖျက်သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်နှင့်သင့်ခြင်းမရှိဘဲလုပျဆောငျဖို့လိုနေသည် သတိထိန်းချုပ်မှု။ ထို့ကြောင့်, သဘောသဘာဝသင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်စိတ်ခံစားမှုရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲသင်၏စက်ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့ခွင့်ပြုအံ့သောငှါအမိန့်ရှိသင်အခါအားလျော်စွာထိုသို့သွားလာရင်းပါစေလတံ့သောထောက်ပံ့လျက်ရှိ၏ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘာဝအတူတူသင်နှင့်အာရုံရရှိထားသူသောနှောင်ကြိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝ, အချိန်များတွင်စိတ်အေးလက်အေးကြောင်းပေးပါသည်။ ဒါဟာအပန်းဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံ၏သွားလာရင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်နှင့်အတူထိတွေ့ထဲကများမှာအိပ်နေစဉ်တွင်, အချို့သဘောဖွငျ့သငျသညျဝေးကနေဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နိုးတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကသင်အိပ်ပျော်သင့်ခန္ဓာကိုယ် left မီသော selfsame "ငါ" ဖြစ်ခြင်း၏ချက်ချင်းမသိ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နိုးသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ဖြစ်စေ, အစဉ်အဆက်, ဘာမှမသိဘူး။ သတိသောအရာ, ထင်သောအရာ, သင်ကိုယ်သင်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြောင်းပြုသောဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အိပ်ပျော်နေစဉ်သင်ထင်မဆင်ခြင်သောအခါဤသည်သိသာဖြစ်လာ; အနည်းဆုံးအား, သင်အိပ်ပျော်ကာလအတွင်းထင်ကြပါလျှင်သင်စဉ်းစားခဲ့ကြသောအရာကို, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အာရုံနိုးသောအခါကိုသိရသို့မဟုတ်မှတ်မိကြပါဘူး။
အိပ်စက်ခြင်းနက်ရှိုင်းသောသို့မဟုတ်အိပ်မက်ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းသင်ကိုယ်တိုင်သို့ဆုတ်ခွာသောပြည်နယ်ဖြစ်တယ်, သောသင်အသိတရားတွေနဲ့ထိတွေ့ထဲကပါ၏ ထိုသို့အာရုံပါဝါသငျသညျ, အကျင့်ဖြစ်သောသူတို့အလုပ်လုပ်သောပါဝါကနေအဆက်ပြတ်ခဲ့ပွီး၏ရလဒ်အဖြစ်လည်ပတ်ရပ်တန့်ခဲ့ကြသည့်အတွက်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကှာပြည်နယ်ဖြစ်၏ သင့်ရဲ့အာရုံနိုးနိုးကွားကွားစဉ်အတွင်းရိပ်မိသောအရာဝတ္ထုများ၏ဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သရုပ်ဆောင်, သဘာဝအတွင်း၌အလုပ်လုပ်မှသဘာဝတရား၏အပြင်ဘက်၌အရာဝတ္ထုလွှဲထားတဲ့အတွက်ပြည်နယ်။ အိပ်ချင်နေတဲ့ကာလအပြီး, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ် re-ထဲသို့ဝင်သောအခါ, သငျသညျမှာတစ်ချိန်ကအာရုံနိုးနှင့်သင့်စက်ရဲ့အသိဉာဏ်အော်ပရေတာအဖြစ်နောက်တဖန်သူတို့ကိုမှတဆင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစတင်အမြဲစဉ်းစားစကားပြောခြင်းကို၎င်း, ခံစားချက်-and- အဖြစ်သရုပ်ဆောင် သငျသညျသောအလိုဆန္ဒ။ တဖန်သင်တို့ကိုချက်ခြင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖေါ်ထုတ်ရာသက်ပန်အလေ့အထမှသည်: သင်ဆိုသညျကား "ငါအိပ်ပျော်ပါပြီ"; "ယခုငါနိုးဖြစ်၏။ "
တစ်နေ့ပြီးဒါပေမဲ့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက, အစားထိုးနိုးနှင့်အိပ်ပျော်နေ့, ဘဝတစျဆငျ့နှင့်သေခြင်းအားဖြင့်, သေသောနောက်ပြည်နယ်မှတဆင့်; အသက်ရှင်ခြင်းကနေဘဝအားလုံးကိုသင်တို့အသက်-သင့်ရဲ့အထောက်အထားနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာသင့်ရဲ့ခံစားချက်ဆက်လက်မှတဆင့်။ သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုတစ်ဦးအလွန်စစ်မှန်သောအရာဖြစ်ပြီး, အမြဲသင်တို့နှင့်အတူအထံ; သို့သော်တဦးတည်းရဲ့ဉာဏ်နားမလည်နိုင်သောအရာနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သို့ရာတွင်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်မသိဖြစ်ကြ၏အာရုံအားဖြင့်ဖမ်းမိမရနိုင်သော်လည်း။ သင်တစ်ဦးခံစားချက်ကြောင့်မသိ; သငျသညျဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုခံစားချက်ရှိသည် ဖြစ်. , self ငါ-သမီးတစ်ဦးခံစားချက်, သငျသညျအသကျရှငျကတဆင့်ဆက်ရှိနေသေးသောကွဲပြားတူညီမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်ကြောင်း, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့မဟုတ်ဆင်ခြင်တုံတရားခြင်းမရှိဘဲ, ခံစားရသည်။
သင့်ရဲ့အထောက်အထား၏ရှေ့မှောက်တွင်ဒီခံစားချက်ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသငျသညျအစဉျအမွဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်အခြားမည်သည့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သည်ဟုမထင်နိုင်အောင်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်၏ သငျသညျ, တူညီတဲ့ပြုသောသင်အမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းသိအဆက်မပြတ်အတူတူကိုယ့်ကိုယ်ကို။ သငျသညျအရာကြွင်းသမျှရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ် တင်. သင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်သင်၏ကိုင်အနားယူသွားပါစေပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုထင်မနိုင်အိပ်သောအခါ, သငျသညျအပြည့်အဝငျသညျတဖနျသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိဖြစ်လာစေရန်နှင့်အထဲတွင်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တခုနေ့ကစတင်သောအခါသင်ဆဲသငျသညျ, တူညီတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို, တူညီတဲ့ပြုသောအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။
အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူအမျှသေမင်းနှင့်ဒါ။ သေခြင်းဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာအိပ်စက်ခြင်းဒါပေမဲ့ဒီလူ့ကမ္ဘာမှယာယီအငြိမ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ သေမင်း၏ယခုအချိန်တွင်သငျသညျငါ-သမီးသင့်ရဲ့ခံစားချက်မသိလျှင်, self ၏, သင်တစ်ချိန်တည်းမှာသေမင်း၏ရှည်လျားသောအိပ်ပျော်ခြင်းသင့်ရဲ့အထောက်အထားများ၏ဆက်လက်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်ကိုသိ၏ဖြစ်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့ညစဉ်ညတိုင်းအိပ်စက်ခြင်းထက်မဆိုပိုပြီးကသက်ရောက်သည် ။ သင်ကအမည်မသိအနာဂတ်မှတဆင့်သင်ရုံအဆုံးသတ်ကြောင်းဘဝမှတဆင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ဆက်လက်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဆက်လက်သွားကြသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို, သင့်ပစ္စုပ္ပန်ဘဝတလျှောက်လုံးသတိသောဤသငျသညျ, သင်၏ဟောင်းတဦးဘဝတစျခုစီမှတဆင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ဆက်လက်၏အလားတူသတိသောတူညီမိမိကိုယ်ကို, သငျသညျအတူတူဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရှည်လျားအတိတ်ယခုသင်ဖို့နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်သော်လည်းမွကွေီးပျေါမှာသင်၏ယခင်ဘဝများဤပစ္စုပ္ပန်ဘဝပင်ဖြစ်သည်ထက်မ သာ. ကြီးမြတ်အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်။ နံနက်တိုင်းသင်က-Do-မဟုတ်-Know-ရှိရာ, သင်-Do-မဟုတ်-Know-မည်သို့လမျးဖွငျ့စလာပြီ, တဖန်မွေးဖွား၏ဤကမ္ဘာ၏သတိဖြစ်လာနှင့်မှသင်၏အိပ်ပျော်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှပြန်လာမယ့်၏နက်နဲသောအရာကိုလည်းမရှိ သေခြင်းနှင့်အချိန်။ သို့သော်ဤသို့မှသာမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထားပြီးရှည်လျားသောကြောင့်နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်မထင်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သဘာဝအဖြစ်တော်မူပြီ ကအမြားအဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကလုံးဝနီးပါးမျှကွဲပြားခြားနားသောအသီးအသီး Re-ဖြစ်တည်မှုရဲ့အစမှာ, သင်လေ့ကျင့်သင်ကြား, သဘာဝအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အဖွဲ့စည်းအသစ်ရဲ့အဖြစ်ကသင်၏မိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းခြင်းဖြင့်အဆင်သင့်လုပ်ထားပြီးကြောင်းအသစ်တခုခန္ဓာကိုယ်ဝင်သောအခါ, သငျသညျတစျဆငျ့သှားပါသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနေ ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖြစ်အသစ်တခုမျက်နှာဖုံး။
တစ်ဦးကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမင်းသား, အကျင့်, ပြောတတ်ရာမှတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မျက်နှာဖုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုပါတယ်။ တစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်ဖို့လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ပြုသော၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်နိုးကြားလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသက်တာ၏အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒရာမာအတွက်ပြုသောအပေါ်ကြာမြင့်ပြီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကျီနှင့်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားသကဲ့သို့ပြုမူခြင်းနှင့်ပြောတတ်မှတဆင့်။ အဆိုပါပြုသောအဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖြစ်အလိုလိုထင်နေတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသကဲ့သို့၎င်း, သည်, ထို masquerader ကကစားသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အလိုလိုထင်, နှင့်မျက်နှာဖုံးအတွက်သတိသနေိုငျမိမိကိုယ်ကိုအဖြစ်အလိုလိုမေ့လျော့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလူ့သဘောသဘာဝနှင့်ဇာတ်ကောင်အတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်မှမဖြစ်နိုင်ဘူး, Re-တည်ရှိမှုနှင့်ကြမ္မာအကြောင်းကိုနားလည်ရန်အခြားလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဘူတာရုံ၏မညီမျှမှု, ကျန်းမာရေးနှင့်အနာရောဂါ, မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအခိုင်အမာမှဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုတစ်ခုစျောဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ထောက်လှမ်းရေး, ပါရမီ, တီထွင်မှု, လက်ဆောင်, မဟာဌာန, လုပ်ပိုင်ခွင့်, သီလ attribute ခြင်းငှါ၎င်း, သို့မဟုတျ, အဝိဇ္ဇာ, ineptitude, အားနည်းခြင်း, ပျင်းရိ, ဒု, ဤအတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏အကြီးအငယ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးရိုးအလိုက်မှလာအဖြစ်အသိနှင့်အကြောင်းပြချက်အသံမှဆန့်ကျင်နေသည်။ မျိုးရိုးအလိုက်ကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်; ဒါပေမယ့်ဇာတ်ကောင်တဦးတည်းရဲ့အတှေးအချေါကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုက၎င်း၏သင်တန်းများအတွက်ဆက်လက်နိုင်ဘူးတခြား, မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၏ဤလောက၏အုပ်စိုးလပြုကြလော့ နှင့်ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုလူ့ရေးရာများတွင်နိုင်တတ်၏။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုအစဉ်အမြဲချက်ချင်းအကြောင်းမရှိနောက်သို့မလိုက်ပါဘူး။ မျိုးစေ့ကြဲရာချက်ချင်းရိတ်သိမ်းသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်မဟုတ်။ အလားတူပင်တစ်ဦးလုပ်ရပ်၏ဒါမှမဟုတ်အတွေး၏ရလဒ်များကိုရှည်ကွားကာလပြီးနောက်သည်အထိပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအတွေးနှင့်တစ်ဦးလုပ်ရပ်နှင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုအကြားဖြစ်ပျက်ကျနော်တို့စိုက်ပျိုးမှုအချိန်နှင့်စပါးရိတ်ရာကာလအကြားမြေပြင်တွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်မြင်နိုင်ပါသည်ထက်မဆိုပိုပြီးမမြင်နိုင်, ဒါကြောင့်ပညတ္တိကျမ်းမညွှန်ကြားသောအခါကသတိထားမိမကျမည်အကြောင်းသော်လည်းသို့သော်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ထင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကမများကကြမ္မာအဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒစေသည်; ထိုသို့ဆေးညွှန်းကြမ္မာအတိုင်း, ပစ္စုပ္ပန်တွင်သို့မဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ရုံတဲ့အခါမှာကိုသိမထားဘူး။
တစ်ဦးကတစ်ရက်နှင့်တစ်သက်တာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အတူတူပါပဲ; သူတို့ပြုသောယင်း၏ကံကြမ္မာကိုထွက်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဘဝနှင့်အတူ၎င်း၏လူ့အကောင့်ထိန်းညှိကစားထားတဲ့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ရှိ၏ကာလကိုထပ်တလဲလဲနေကြသည်။ ညဥ့်နှင့်သေခြင်းလည်းအလွန်ရောနှောနေသောခေါင်းစဉ်: သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြွင်းသောအရာနှင့်အိပ်စက်ခြင်းစေကွာချော်အခါ, သင်သေခံခြင်းမှာခန္ဓာကိုယ်စွန့်ခွာတဲ့အခါသင်ဖြတ်သန်းသွားသောအရာမှအလွန်ဆင်တူအနေနဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်သွားပါ။ သင့်ရဲ့ညစဉ်ညတိုင်းအိပ်မက်, ထိုမှတပါး, သင်မှန်မှန်ရှောက်သွားရသောမှတဆင့်ပြီးနောက်သေခြင်းပြည်နယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်: နှစ်ခုစလုံးပြုသော၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဟူမူကား, သင်သည်သင်၏နှိုးအတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်အသက်ရှင်နေထိုင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, သင့်အာရုံနေဆဲသဘာဝပေမယ့်သဘာဝတရား၏အတွင်းပိုင်းပြည်နယ်များအတွက် functioning ။ တဖန်သင်တို့ပြန်လည်ယခုအချိန်တွင်သည်အထိသင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏တံခါးခုံပေါ်တွင်စောင့်ဆိုင်းရသောထဲမှာအလွတ်ကာလဖို့အိပ်ချင်ညစဉ်ညတိုင်းကာလအခါအာရုံမရှိတော့ function ကို-The ဘာမှ-သတင်းထောက်၏အဘယ်သူမျှမမှတ်ဉာဏ်လည်းမရှိသည့်အတွက်မေ့လျော့၏ပြည်နယ် သင်တို့အဘို့အငျဆငျထားပြီသောမွေးကင်းစကလေးခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ကလေးကခန္ဓာကိုယ်: ဇာတိပကတိ၏အအသစ်တစ်ခုကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသင့်ရဲ့အာရုံနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
သင်တစ်ဦးအသက်တာသစ်စတင်လာတဲ့အခါသင်တစ်ဦးမီးခိုးမြူ၌ရှိသကဲ့သို့, မသိ။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ ငါ-သမီးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဒီခံစားမှုဖြစ်ကောင်းသင်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်များအတွက်မသိရာ၏တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့အရာဖြစ်၏။ အားလုံးတခြားနက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ခဏသင်သည်သင်၏ထူးဆန်းတဲ့အသစ်သောခန္ဓာကိုယ်နှင့်မရင်းနှီးသောပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုပုံဖြစ်ကောင်းပင်ခံရသော်လည်းနိုင်အောင်မှိုင်လျက်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်၎င်း၏အာရုံကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအဖြစ်ဒါပေမယ့်သင်ကနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သင်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းခံစားရရန်သည်အခြားလူသားတွေနေဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်, သင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကြောင်းခံစားမိစေလျက်ရှိသည်။
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အာရုံ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ပို. ပို. လာအဖြစ်အညီ, သင်တို့ကိုလျော့နည်းခြင်းနှင့်သင်သိမ်းပိုက်သောခန္ဓာကိုယ်မှကွဲပြားတစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းလျော့နည်းသတိဖြစ်လာသည်။ သငျသညျကလေးဘဝထဲကကြီးထွားအဖြစ်သင်အာရုံ၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်အသိတရားသိမြင်နိုင်သော, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးမပေးကြောင်းလက်တွေ့ကျကျအရာအားလုံးနှင့်အတူထိတွေ့ဆုံးရှုံးလိမ့်မည် သငျသညျစိတျပိုငျးသာဖြစ်ရပ်၏, ထင်ယောင်ထင်မှားမသိ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျထောင်ကျလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေများအောက်၌သင်သည်သေချာပေါက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးရာသက်ပန်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးက သာ. ကြီးမြတ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမမူသောသင်တို့ကိုမှန်ကန်ကိုယ်ပိုင်ကြောင့် သာ. ကြီးမြတ်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်၏ မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၏ဤကမ္ဘာ၏, ဒါပေမယ့်အရာ, အမြဲတမ်းအတွက်၏ All-pervading ဘုံတှငျသတိရှိရှိသနေိုငျ, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်သေခြင်း၌ရှိသမျှကိုသင်၏ interludes အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောသင့်ရဲ့ဘဝသက်တမ်းအားဖြင့်သင်တို့နှင့်အတူတစ်ဦးရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျေနပ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ခုခုက Man ရဲ့ရာသက်ပန်ရှာဖွေရေးအဖြစ်မှန်၌မိမိအမှန်တကယ်ကိုယ်ပိုင်များအတွက်ရှာပုံတော်ဖြစ်၏ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း၏အမွဲမွံခွငျးသတိဖြစ်ပြီး, ခံစားရနှင့်သိရန်လိုသည့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ, ကိုယ်ပိုင်ငါ-သမီး။ ထို့ကြောင့်အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်, ကိုယ်ပိုင်အသိပညာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခံရဖို့လူ့ရှာ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရရည်မှန်းချက်သော်လည်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဘို့အမြော်ကြည့်ပေမယ့်လူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၌တွေ့ဘယ်တော့မှသောမွဲ, ပြည့်စုံ, ပြည့်စုံသည်။ ထို့ပြင်အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်ယောက်ျားသည်တိရစ္ဆာန်ထက်အနည်းငယ်ပိုပါလိမ့်မယ်အရာဥပဒေနှင့်မရှိဘဲတရားမျှတမှု-အဖြစ်အခွင့်အရေးနှင့်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်, သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်တာဝန်အဖြစ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပြောတတ်သောအစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်တရားသူကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်ရှိပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်း Trinity များထဲမှခွဲခြားယူနစ်ကြောင့်ဒါဟုခေါ်တွင်ဤစာအုပ်၌, Triune ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်: တစ် knower အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, တစ်ဦးတွေးခေါ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပြုသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏။ အဆိုပါပြုသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာသောအဘို့ကိုတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လူ့စေနိုင်သည်။ အဲဒီစိတျအပိုငျးဒီမှာပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်ချေါတယျခံပြီး။ တစ်ဦးချင်းစီကလူ့အဆိုပါခံပြီးပြုသောဖြစ်ခြင်းအခြား Triune တည်အကြားကွဲပြားတဲ့ယူနစ်ဖြစ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Triune ကိုယ်ပိုင်, တစ်ဦးကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်နဲ့ knower အစိတ်အပိုင်းများကိုမွေးဖွားနှင့်သေခြင်းနှင့်အချိန်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ကမ္ဘာကြီးပြံ့နှံ့နသောထာဝရအမြဲတမ်း၏ဘုံ, ၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်အာရုံအားဖြင့်၎င်း, ခန္ဓာကိုယ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်, ထို့ကြောင့်၎င်း၏ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏အစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်တွေးခေါ်နဲ့ knower အစိတ်အပိုင်းများ၏အဖြစ်မှန်မသိဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာသူတို့ကိုလွဲချော်; ယင်းအာရုံ၏အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမျက်စိကန်း, ဇာတိပကတိ၏အကွိုင်ကကိုင်ထားပါ။ ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ပုံစံများကိုကျော်လွန်ပြီးမမြင်နိုင်ပါဘူး, ကဇာတိကွိုင်ကနေသူ့ဟာသူလွတ်များနှင့်တစ်ဦးတည်းရပ်တည်ရန်ကြောက်ရွံ့။ အဆိုပါခံပြီးပြုသောကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလားလားနှင့်အသိထင်ယောင်ထင်မှား၏တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းဖယျရှားဖို့အဆင်သင့်ထေူသည့်အခါ၎င်း၏တွေးခေါ်နဲ့ knower အမြဲကိုယ်ပိုင်အသိပညာဖို့လမ်းပေါ်မှာအလင်းပေးစေခြင်းငှါအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တွေးခေါ်နဲ့ knower များအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ခံပြီးပြုသောနိုင်ငံခြားတွင်လှပါတယ်။ အထောက်အထားဒါမှမဟုတ်အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်, အစဉ်မပြတ်ခပ်သိမ်းသောလူ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်လူသားတွေတွေးဖို့နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပလေတို, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံး Illustrious နှင့်ဒဿနသူ၏ကျောင်း, အကယ်ဒမီ၌သူ၏နောက်လိုက်တစ်ဦးပညတ်အဖြစ်အသုံးပြုဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒဿနပညာရှင်၏ကိုယ်စားလှယ်: -gnothi seauton "ကိုယ်သိပါ" ။ သူရေးထားသောစာကနေသူအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားဘယ်သူမျှမက "ဝိညာဉျကို" ထက်ပိုမိုလုံလောက်သောဘာမှအဖြစ် English သို့ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးပေမယ့်သူ, အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးနားလည်မှုရှိခဲ့ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ပလေတိုအစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေ့ရှိချက်ကိုရည်မှတ်စုံစမ်းရေးတစ် method ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မိမိအဇာတ်ကောင်များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်၌ကြီးသောအနုပညာရှိ၏ မိမိအသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကရင်လူမျိုးများသည်သူ၏နည်းလမ်းကိုရိုးရှင်းပြီးလေးနက်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ဘဲသင်ယူထက်ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းသူစိတ်ပိုင်းပျင်းရိစာဖတ်သူကို, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိပလေတိုငွီးငှေ့ဖှယျထင်ပါလိမ့်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့သည်သူ၏စကားနည်းလမ်း, စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဆင်ခြင်ခြင်း၏သင်တန်းကိုလိုက်နာနိုင်ပါလိမ့်ငှါ၎င်း, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေတွေကို၏မေ့လျော့မပေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်; အခြားသူတဦးတယောက်မှအငြင်းပွားမှုများအတွက်ရောက်ရှိသည့်ကောက်ချက်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်, ပလေတိုအသိပညာတစ်ခုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အတူသင်ယူသူတင်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာသူတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်အားဖြင့်သူကအလင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ၏ဘာသာရပ်၏အသိပညာမှဦးဆောင်နိုင်အောင်, စဉ်းစားတွေးခေါ်ထဲတွင်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ရည်ရွယ်ပိုဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည်ကား, ဆိုကရေးတီးနည်းလမ်း, နောက်တော်သို့လိုက်လျှင်ကျိန်းသေတဦးတည်းထင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ကူညီပေးပါမည်သည့်အသိဉာဏ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေကိုတစ်ဦးစကားစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်; နှင့်ရှင်းလင်းစွာပလေတိုစဉ်းစားရန်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်၌ သာ. ဖြစ်ကောင်းအခြားမည်သည့်ဆရာထက်ပြုတော်မူပြီ။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှအရေးအသားသူသည်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကိုအဘယျကိုပြောပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းလာကြပြီ ဒါမှမဟုတ်ဘာအစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါကအသိပညာပေးဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တဦးတည်းနောက်ထပ်မကွညျ့ရမယျ။
"အဲဒီအနုပညာကိုယျတျောသညျ" (Tat tvam asi): အိန္ဒိယရှေးဟောင်းသင်ကြားရေးအတွက်ယခုလိုကြေညာချက်၌ထချုပ်ဖော်ပြနေသည်။ အဆိုပါသင်ကြားမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်မထားဘူး, သို့သော်, အဘယ်သို့သောအဒါမှမဟုတ်ဘာကို "ကိုယျတျောသ" သည် "ကြောင်း"; ဒါမှမဟုတ် "အဲဒီ" နှငျ့ "ကိုယျတျောသ" related နေကြတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖော်ထုတ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်အဘယ်သို့သောလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးဤစကားများအားသူတို့နားလည်ဖြစ်ကြောင်းအသုံးအနှုန်းများရှင်းပြရပါမည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်မှန်လျှင်။ ပင်လယ်၏ရေစက်ကဲ့သို့အများကြီးအားလုံးအိန္ဒိယအတွေးအခေါ်-မှလူသည်နှင့်အစဉ်အမြဲတစ်ဦးပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်တစ်လောကလုံးတစ်ခုခု၏တစ်ဦးချင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကာနေိုငျသောအရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးဖွစျဖို့ကျောင်းအုပ်ကြီး-ပုံရသည်ကျောင်းများ၏အထွေထွေအမြင်ယူ၏ပစ္စည်းဥစ္စာ, ရေသမုဒ္ဒရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်တစ်မီးပွားကယင်း၏မူရင်းနှင့်ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အတွက်မီးလျှံနှင့်အတူတစ်ခုဖြစ်သည်သကဲ့သို့, နှင့်နောက်ထပ်ကကျောင်းအုပ်ကြီးကျောင်းများ, ထိုအတ္တ, သို့မဟုတ်ပူရုရှားအတွက်ချေါကြောင့်ဒီတစ်ဦးချင်းအရာတစ်ခုခု, ဤခံပြီးပြုသော-သို့မဟုတ်, သောအဓိပ္ပာယ်ထင်ယောင်ထင်မှား, မာယာ၏ကုလားကာသဖြင့်ရုံတစ်လောကလုံးတစ်ခုခုကနေကွဲကွာ -is ကြောင်း လူ့အတွက်ကျင့်သီးခြားနှင့်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်သူ့ဟာသူစဉ်းစားစေတော်မူ၏ , ဆရာကြေညာသော်လည်း, အဘယ်သူမျှတစ်ဦးချင်းစီအကြီးအတစ်လောကလုံးတစ်ခုခုကနေဆိတ်ကွယ်ရာလည်းမရှိ, ဗြဟ္မာချေါ။
အဆိုပါသင်ကြားမှုဟာတစ်လောကလုံးဗြဟ္မာ၏ခံပြီးအပိုင်းအစများဟာတစ်လောကလုံးဗြဟ္မာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏သတိလစ်လူ့ဖြစ်တည်မှုနှင့်တော့သည်ဆငျးရဲဒုက်ခအားလုံးကိုဘာသာရပ်, ဖြစ်ကြောင်း, နောက်ထပ်ဖြစ်၏ ရှည်လျားသောအသက်အရွယ်ပြီးနောက်, အပေါငျးတို့သအပိုင်းအစများတဖြည်းဖြည်းတစ်လောကလုံးဗြဟ္မာအတွက် re-စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်မှီတိုင်အောင်, သဘောသဘာဝအတွက်ကလေးမွေးဖွားနှင့်သေဆုံးမှုများနှင့် re-ဂျမြား၏ဘီးမှခညျြနှောငျ။ အကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်အပိုင်းအစများအဖြစ်လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်ဗြဟ္မာရဲ့သွားဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့်၏လိုလားသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်မဟုတ်ပါ, သို့သော်, ရှင်းပြသည်။ ကယူဆရပြီးပြည့်စုံသောတစ်လောကလုံးဗြဟ္မာသည်သို့မဟုတ်ကအကျိုးအမြတ်ရနိုင်ပုံကိုပြသသည်မဟုတ်လော, ယင်း၏အပိုင်းအစများအမြတ်အစွန်းများသို့မဟုတ်ဘယ်လိုမဆို, သို့မဟုတ်ဘယ်လိုသဘောသဘာဝအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပါသည်။ လူ့ဖြစ်တည်မှု၏တပြင်လုံးကိုအမှတ်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအချည်းနှီးပေးနေတာဖြစ်ဟန်လိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာတစ်လမ်းတစ်စနစ်တကျအရည်အချင်းပြည့်ရှာကြံတစ်ဦးချင်း, "အထီးကျန်" ဒါမှမဟုတ်သဘာဝမှပစ္စုပ္ပန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်ခံရာမှ "လွတ်မြောက်မှုကို" သောညွှန်ပြနေသည်, သူရဲကောင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်ကွယ်ပျောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝထင်ယောင်ထင်မှားကနေဆွဲထုတ်များနှင့်ရှေ့ဆက်၏သွားစေခြင်းငှါ သဘာဝကနေယေဘုယျထွက်ပေါက်။ လတ်ြလပ်ခယောဂ၏အလေ့အကျင့်အားဖြင့်ကဆိုပါတယ်, မှီခံရဖို့ရှိ၏ ယောဂမှတဆင့်အဘို့အကစဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်အတ္တ, အပူရုရှား-The ခံပြီးသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုဖိနှိပ်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးဖို့ပြုသော-သိတော့, နှင့်၎င်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ရှည်လျားချည်နှောင်ခြင်းကိုခဲ့ပြီးသောသဘောထင်ယောင်ထင်မှား dissipates နိုင်အောင်စည်းကမ်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု; အရှင်နောက်ထပ်လူ့ဖြစ်တည်မှုရဲ့လိုအပ်ချက်ကနေလွတ်မြောက်လာခံရပါကနောက်ဆုံးတွင်တစ်လောကလုံးဗြဟ္မာသို့ reabsorbed ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအားလုံးအတွက်အမှန်တရားများ၏အငွေ့အသက်များနှင့်ထို့ကွောငျ့အများကြီးကောင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Yogi သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သူ၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုဆုံးမသောဖို့အမှန်ပင်သိလာကြတယ်။ သူဟာ, အလိုတော်မှာသာမန်ပုမကျွမ်းကျင်သူတွေပဲလူ့အသိတရားများကရိပ်မိသောသူတို့အားကိစ္စအတွင်းပိုင်း၏ပြည်နယ်များမသိနိုင်ပါတယ်ရှိရာအချက်အားမိမိအာရုံကိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်ယူစေခြင်းငှါ, အရှင်စူးစမ်းခြင်းနှင့်ဖြစ်ကြောင်းသဘာဝပြည်နယ်များနှင့်အတူကြှမျးဝငျဖွစျဖို့ enabled စေခြင်းငှါ အများဆုံးလူသားဖို့နက်နဲသောအရာ။ သူသည်နောက်ထပ်, သဘောသဘာဝအချို့တပ်ဖွဲ့များကျော်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ၏မြင့်မားသောဒီဂရီမှီနိုငျသညျ။ သံသယမရှိ undisciplined ပြုသော၏ကြီးစွာသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်ကင်းသောတစ်ဦးချင်းစီသတ်မှတ်အားလုံးသော။ ယောဂ၏ system ကို "အထီးကျန်" ဟုအဆိုပါအာရုံ၏ထင်ယောင်ထင်မှားထံမှခံပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် "လွတ်မြောက်ရန်" သို့မဟုတ်မှ purports သော်လည်း, ကျွန်တော်အဲဒါကိုအမှန်တကယ်သဘောသဘာဝ၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်တဦးတည်းဦးဆောင်ဘယ်တော့မှကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရသည်။ ဒီအတညျ့အလငျးစိတ်ကိုရည်မှတ်တစ်ဦးနားလည်မှုလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောဂလေ့ကျင့်သောစိတ်ကို, ထိုဉာဏ်သဘော-စိတ်ထဲဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်နှင့်ပြုသောများ၏အလိုဆန္ဒများအတွက်စိတ်: ဒါဟာဒီနေရာမှာပုံမှန်နှစ်ခုသည်အခြားစိတ်ကနေခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲအဖြစ်နောက်ပိုင်းတွင်စာမကျြနှာတှငျဖျောပွထားသောပြုသော၏အထူးပြုတူရိယာ, ပုံမှန်မဟုတ် heretofore သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ခံပြီးပြုသော၎င်း၏အာရုံမှတဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နေဖြင့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယျခန်ဓာ-စိတ်ထဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာသဘာဝမှတင်းကြပ်စွာဤအရပ်ပုအသိတရားတင်းကြပ်စွာကန့်သတ်ခြင်း, ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေတဆင့်လူ့ရှိသော၎င်း၏ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ရှုထောင့်ရှိအဝဠာသတိဖြစ်ပါသည်: အချိန်, ထင်ယောင်ထင်မှားလောကီသားတို့သည်။ တပည့်သည်သူ၏ဉာဏ်ထက်မြက်ပေသော်လည်းထို့ကြောင့်, သူနေဆဲလူ့အလောင်းတွေအတွက်ဆက်လက် Re-တည်ရှိများ၏လိုအပ်ချက်မှလွတ်မြောက်မဟုတ်, ဆဲသဘောသဘာဝအတွက်ချည်နှောင်ခြင်းကို, သူ့အာရုံတို့အပေါ်မှာမူတည်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာထငျရှားပါသညျ။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်သို့သော်ကျင့်သည်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်စက်၏အော်ပရေတာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်အစွမ်းကြောင့်သဘာဝကနေသူ့ဟာသူခွဲထုတ်သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်ရန်မရဘူး, သာ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲနှင့်အတူစဉ်းစားအသုံးပြုပုံအလိုလိုသို့မဟုတ်ယင်း၏အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်အသိပညာရဖို့မနိုင်, ထိုကဲ့သို့သောဘာသာရပ်များအဘို့အစဉ်မပြတ်ဉာဏ်မှနက်နဲသောအရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သာခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ၏စိတ်ထဲတွင်နှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲ၏မှန်ကန်စွာညှိနှိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာကတဆင့်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ၏စိတ်ထဲတွင်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏အရှေ့စနစ်များအတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီမထင်ထားဘူး။ ဒီအထောက်အထား Patanjali ရဲ့ယောဂအတွေးစကားပုံကတော့လေးစာအုပ်တွေ၌၎င်း, ရှေးအလုပ်အပေါ်အမျိုးမျိုးဝေဖန်တှငျတှေ့ရနျဖွစျသညျ။ Patanjali ဖြစ်ကောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒဿနပညာရှင်များအများဆုံးလူအများကလေးစားကြသည့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးထားသောစာလေးနက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့သင်ကြားခြင်းပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်စေကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေပုံရသည်; သူ၏နာမကိုထမ်းသောနူးညံ့သောသိမ်မွေ့န္တာန်တိအဘို့သူတို့အပေါ်ယံရည်ရွယ်ထားတဲ့များအတွက်အလွန်ရည်ရွယ်ချက်ဖျက်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်အောင်ယ့်ပုံပဲ။ ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောဝိရောဓိရာစုနှစ်တဆင့်လုံးလုံးလြားလြားဆက်လက်ရှိနိုင်တယ်လို့လူ့အတွက်ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒပတ်သက်သည့်ဤနောက်ပိုင်းတွင်အခန်းကြီးထဲမှာန့ ်. ဘာ၏အလငျး၌သာရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့သင်ကြားမှုအခြားအတွေးအခေါ်များကဲ့သို့လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကို၏နက်နဲသောအရာကို၎င်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အကြားစပ်လျဉ်း၏နက်နဲသောအရာကိုနှင့်သဘောသဘာဝများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစကြဝဠာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အိန္ဒိယဆရာ, ဆရာမသူတို့သဘောသဘာဝတို့နဲ့ခွဲခြားသိမြင်သည်အတိုင်း, ပူရုရှားသည်ခံပြီး, ပြုသော-သောအရာကိုဒီသတိ Self-ဟာအတ္တကိုသိသောမပြကြဘူး: အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောဂုဏ်ထူးထဲမှာ-The-ခန္ဓာကိုယ်ပြုသော-နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြားဖန်ဆင်းထားသည် အရာသဘာဝတရား၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂုဏ်ထူးကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အထဲကထောက်ပြဖို့ပျက်ကွက်ကွောငျးထငျရှားသောခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထငျမှားသို့မဟုတ်နားလည်မှုလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒသည်ဤအချက်မှာရှင်းပြကြောင်းလိုအပ်ပါသည်။
ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏တစ်ဦးကထည့်သွင်းစဉ်းစားအရေးကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုမိတ်ဆက်နှင့်ဝေးဤစာအုပ်ထဲရှိန့ ်. ဘာသာရပ်များသို့ရောက်ရှိ။ ၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့်တန်ဖိုးမတန်တဆရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏နားလည်မှုနှင့်အသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏တိုးတက်မှုအတွက်အလှညျ့အပွောငျးဆိုလိုမည် ဒါကြောင့်သူတို့သည်မှောင်မိုက်၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သောအားဖြင့်အယူမှားအတှေးအချေါ, မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်များ, မှားယွင်းသောရည်မှန်းချက်များထံမှပြုသောလွတ်မြောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတာရှည်ဆင်ကန်းတောတိုးလက်ခံလိုက်ပါသည်တဲ့မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက် disproves; ယခုဒီတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပုံအဘယ်သူမျှမကမေးမြန်း၏ထင်တော်မူကြောင်းကိုလူသားတွေ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်အမြစ်တွယ်သောယုံကြည်ချက်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည်: လူတိုင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာရုံအရေအတွက်ငါးခုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်ခံစားမှုဟာအာရုံတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ဆုံးမသွန်သင်ထားသည်။ အဆိုပါအာရုံ, ဤစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်သတိပေမယ့်သတိမရှိသောသဘာဝတရား၏ယူနစ်, ကို elemental သတ္တဝါတို့ဖြစ်ကြသည်။ သာလေးအာရုံရှိပါတယ်: မျက်မှောက်, ကြားနာ, အရသာနှင့်အနံ့; စီအဓိပ္ပာယ်များအတွက်အထူးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုသည်ရှိ၏, ခံစားချက်-သော်လည်းကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏, မသဘာဝမ-ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေမယ့်ခံစားချက်အဘို့အဘယ်သူမျှမကအထူးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလည်းမရှိ။ ဒါဟာပြုသော၏နှစ်ခုရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များမှာလည်းခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒရှိပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကရှင်းပြသည်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်များ, လူ့ထံမှပြုပြင်မွမ်းမံဖြစ်ကြသည်။
တူညီတဲ့ဆန္ဒ, အကျင့်၏အခြားရှုထောင့်ကပြောသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့ဖြစ်ကြသည်အတူတကွထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်; မကအခြားမပါဘဲမတည်ရှိနိုင်, သူတို့အနေနဲ့လျှပ်စစ်လက်ရှိ၏နှစ်ခုထမ်းဘိုး, တစ်ဦးအကြွေစေ့၏နှစ်ဖက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ခံစားချက်-and ဆန္ဒ သို့ဖြစ်. ဤစာအုပ်ကိုဝင်းဝေါဟာရကိုအသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။
အဆိုပါပြုသော၏ခံစားချက်-and ဆန္ဒဟာအာရုံပြောင်းရွေ့နေကြရသောသဘာဝနှင့်အားဖြင့်အသိဉာဏ်တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ ဒါဟာနေရာတိုင်းပစ္စုပ္ပန်သောဖန်တီးမှုစွမ်းအင်အတွင်းရှိ၏ ကခြင်းမရှိဘဲအားလုံးဘဝငြိမ်းလိမ့်မယ်။ ခံစားချက်-and ဆန္ဒ, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို, ရိပ်မိသည်ပဋိသန္ဓေကိုဖွဲ့စည်း, ဘွားဆောင် ခဲ့. , ထိန်းချုပ်ထား, လူ့အလောင်းတွေအတွက်ပြုသော၏အေဂျင်စီမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာ၏အစိုးရဖြစ်ကြ၏သောသူတို့၏အမျိုးအရှိမရှိထားတဲ့အားဖြင့် beginningless နှင့်အဆုံးမဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာဖြစ်ပါတယ် သို့မဟုတ်အကြီးအ Intelligence ၏။ ခံစားချက်-and ဆန္ဒအားလုံးအသိဉာဏ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်၌, ခံစားချက်-and ဆန္ဒကဒီတစ်ဦးချင်းစီသဘောသဘာဝစက်လည်ပတ်ရသောသတိတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ လေးပါးအာရုံ-ခံစားချက်တွေကိုမတဦးတည်း။ ခံစားချက်, အကျင့်၏ passive ရှုထောင့်, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယျခန်ဓာခံစားရနှင့်အာရုံသကဲ့သို့, လေးခုအာရုံအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှကူးစက်သောဆွဲဆောင်မှုခံစားရသောခံစားသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်ကြောင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားဒီဂရီအတွက်ထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်တစ်ခုလေထုတစ်ဦးသတိပေးချက်အဖြစ် supersensory တွေ့ကြုံ, ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်; ကမှန်ရာကိုခံစားရနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကမှားသည်, ကသြတ္တပ္ပစိတ်များ၏သတိပေးချက်များခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒ, တက်ကြွစွာရှုထောင့်, အကျင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၏အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆျောသောသတိတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ နှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏ရှုထောင့်များတွင်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို: အရှင်သည်အလိုဆန္ဒတစ်ဦးခံစားချက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာနှင့်တိုင်းခံစားမှုတစ်ဦးအလိုဆန္ဒမှမြင့်တက်ပေးသည်။
သင်ဆန္ဒအလျောက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကနေတဆင့်အသိဉာဏ်ခံစားမှုလက်ဆောင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားတဲ့အခါသင်ခံစားရသောခန္ဓာကိုယ်မှကွဲပြားသကဲ့သို့, ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကို၏အသိပညာပေးဖို့လမ်းတခုတခုအပေါ်မှာအရေးကြီးသောခြေလှမ်းယူပြီးနှင့်တစ်ပြိုင်နက်သတိပါဝါအဖြစ်ပါလိမ့်မည် အလိုဆန္ဒ၏သင့်အသွေးအားဖြင့်တက်လာခြင်း, သေးရာထိုအသွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားချက်-and ဆန္ဒလေးပါးကိုအာရုံ synthesize သငျ့သညျ။ ခံစားချက်-and ဆန္ဒ၏အရပျမြားနှငျ့ function ကိုတစ်ဦးနားလည်မှုများစွာကိုအသက်အရွယ်အဘို့အလူသားတွေအတွက်ကိုကျင့်သောသူသာလျှင်မျှသာလူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားစေသောယုံကြည်ချက်ကနေထွက်ခွာသွား၏အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အတွက်ခံစားမှု-and ဆန္ဒ၏ဤဥာဏ်နှင့်တကွ, အိန္ဒိယ၏ဒဿနယခုအသစ်ကလေးမွတျနှငျ့အတူဆကျလကျနိုင်ပါသည်။
အရှေ့သင်ကြားမှုခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကို၏အသိပညာမှီနိုင်ဖို့အတွက်တအာရုံ၏ထင်ယောင်ထင်မှားမှလွတ်မြောက်ရပါမည်ဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ပျက်ကွက်ရာမှဖြစ်ပေါ်သည်ဟုမိစ္ဆာတှေးအချေါနှငျ့အရေးယူထံမှ ။ ဒါပေမယ့်ခံစားချက်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အာရုံတစ်ခုဖြစ်သည်သောတစ်လောကလုံးအထငျမှားလုပ်ဆောင်ရမှာတွေမပေးပါဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဆရာထိတွေ့သို့မဟုတ်ခံစားချက်တစ်ခုပဉ္စမအဓိပ္ပာယ်ကြောင်းဖော်ပြ; ကြောင်းအလိုဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိ၏ နှင့်ခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒနှစ်ခုစလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘာဝတရား၏အမှုအရာဖြစ်ကြောင်း။ ဒီအယူအဆအရကပူရုရှား, ဒါမှမဟုတ်အတ္တ-The ခံပြီးပြုသော, ခံစားချက်-and ဆန္ဒ-ရမယ်လုံးဝခံစားမှုဖိနှိပ်နှင့်ရှင်းရှင်းအလိုဆန္ဒ "အထဲကသတ်ပစ်" ကိုဖကျြဆီးရမည်ဟုစောဒကတက်သည်။
ခံစားချက်-and ဆန္ဒရည်ကဒီမှာပြသထားသည်အရာကိုအလင်း၌ကအရှေ့များ၏သင်ကြားမှုအတွက်မဖြစ်နိုင်အကြံပေးကြောင်းထင်ရပေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် indestructible နေိုငျသောမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်နှိုက်ကမဖျက်ဆီးနိုင်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှု-and ဆန္ဒမပါဘဲအသက်ရှင်သွားကြဖို့အတှကျအဖြစ်နိုင်လျှင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးမျှသာခိုငျအသက်ရှူ-ယန္တရားလိမ့်မည်။
ဘေးဖယ်ခံစားမှု-and အလိုရှိသည်တွင်အိန္ဒိယဆရာ Triune ကိုယ်ပိုင်တဲ့အသိပညာသို့မဟုတ်နားလည်မှုရှိခြင်းမရှိသက်သေအထောက်အထားပေးသူတို့ရဲ့နားလည်မှုလွဲမှ။ အဆိုပါ unexplained ကြေညာချက်တွင်: ကက "ကိုယျတျောသ" သူကိုင်တွယ်သောအတ္တကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးရမည်ဖြစ်သည် "ကိုယျတျောသသောဖွစျတျော", ထိုပူရုရှား-တစ်ဦးချင်းစီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခံပြီး; နှင့်သောက "ကိုယျတျောသ" အရှင်ဖော်ထုတ်သောနဲ့အတူ "အဲဒီ" ဟုအဆိုပါတစ်လောကလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကို, ဗြဟ္မာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြုသောနှင့်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အကြားလုပ်အဘယ်သူမျှမခြားနားရှိ၏ ထိုနည်းတူအဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗြဟ္မာများနှင့်တစ်လောကလုံးသဘောသဘာဝအကြားခွဲခြားရန်သက်ဆိုင်ရာပျက်ကွက်ရှိသေး၏။ လူအပေါင်းတို့၏အရင်းအမြစ်နှင့်အဆုံးတစ်ဦးချင်းစီတည်ခံပြီးအဖြစ်တစ်ခု universal ဗြဟ္မာ၏ဒေသနာမှတဆင့်ပြုသော၏မရေမတွက်သန်းပေါင်းများစွာဟာသူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်တည်၏အဝိဇ္ဇာထားခံပြီ တဦးတည်းရဲ့ဇစ်မြစ်အစစ်အမှန်, တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီအကြီးအကိုယ်ပိုင်အခြားတစ်ဦးချင်းစီသနေိုငျတည်အကြားသဖြင့်, ထိုမှတပါးတောင်မည်သူမဆိုရှိသည်နိုင်သောအဖိုးတန်ဆုံးအရာဖြစ်သောသောတစ်လောကလုံးဗြဟ္မာအတွက်ဆုံးရှုံးဖို့, ပုံစံမျိုးရယူရန်, မျှော်လင့်လာကြပြီ။
; ကအရှေ့ဒဿနသဘောသဘာဝမှပူးတွဲပြုသောစောင့်ရှောက်ရန်တွေကနေပေါက်ဖွားနှင့်၎င်း၏အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်၏အဝိဇ္ဇာအတွက်ဤသွန်သင်ချက်တွေကိုမသိဘဲလျက်ပဋိသန္ဓေယူပြီနိုင်ကြောင်းမိုနှင့်မဖြစ်နိုင်ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သော်လည်း သူတို့ကအမှန်တရားမှလူစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ perpetuated, ဒါကြောင့်ကျအောကျခံပြီနိုင်ကြောင်း။ အဲဒီအစားကတည်ဆဲပုံစံများသို့သော်ရှေးခေတ်သူတို့က, မျှသာယဉ်ကျေးမှုမှဆင်းသက်လာခဲ့ကြောင်းအများကြီးအဟောင်းတွေစနစ်၏ vestigial အကြွင်းအကျန်များမှာစေခြင်းငှါအလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးမေ့လျော့: အမှန်တကယ်သိရှိခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါဩဝါဒပေးတတ်သော, ကြောင်းထင်သည်အထင်မှားပုသနေိုငျပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ခံစားမှု-and ဆန္ဒအသိအမှတ်ပြု; သောပြုသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိပညာဖို့လမ်းပြသခဲ့သည်။ လက်ရှိပုံစံများ၏အထွေထွေ features တွေထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြု; နှင့်သောအသက်အရွယ်မရွေးသင်တန်းအတွက်မူရင်းသင်ကြားမှု imperceptibly တစ်ခု universal ဗြဟ္မာများနှင့်ကန့်ကွက်စရာတစ်ခုခုအဖြစ်သနေိုငျခံစားမှု-and ဆန္ဒနှင့်အတူကွယ်ပျောက်လုပျမယ်လို့သောဝိရောဓိအယူဝါဒ၏ဒေသနာမှလမ်းကိုပေး၏။
အဆိုပါ Bhagavad Gita, အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရတနာ၏အဖိုးတန်ဆုံး: လုံးဝဝှက်ထားသောမဟုတ်သောဘဏ္ဍာကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းကိုကျော်လွန်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပုလဲဖြစ်ပါတယ်။ Arjuna မှ Krishna ဟိန္ဒူများက imparted အဆိုပါအမှန်တရားတွေ, သူတော်ကောင်းတရားလှပသော, ထာဝရဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒရာမာသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအတွင်းရှိဝေးသမိုင်းဝင်ကာလ, နှင့်၎င်း၏အမှန်တရားတွေဖုံးခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေလေသည်ထားတဲ့အတွက်ရှေးဟောင်းဝေဒအယူဝါဒတစ်ခုကိုအရမ်းခက်ခဲကိုဇာတ်ကောင် Krishna ဟိန္ဒူနှင့် Arjuna တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရန်အဘို့လုပ်; ဘယ်လိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်; အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ရုံးအခြားဖို့, ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတရားမျှတစွာကြည်ညိုလေးမြတ်လိုင်းများအတွက်သင်ကြားရေးအဓိပ္ပာယ်ကိုအပြည့်အဝ, ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကို၏ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုလုံးဝနီးပါးလုံးဝဝှက်ထားလျက်ရှိ၏နိုင်အောင်နှင့်အတူရောထွေးနှင့်ရှေးကသြောဘာသာရေးနှင့်မျြးစာအယူဝါဒအားဖြင့်ယုတ်လျော့သည်နှင့်၎င်း၏အစစ်အမှန်တန်ဖိုးကိုအညီတန်ဖိုးလျော့ကျနေပါတယ်။
အရှေ့ဒဿနအတွက် Clear ၏အထွေထွေမရှိခြင်း, ထိုသို့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တဦးတည်းရဲ့အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်၏မိမိကိုယ်ကို၏အသိပညာတစ်ခုလမ်းညွှန်အဖြစ် Self-ဆနျ့ကငျြဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုတဲ့အချက်ကိုမှမရှိစေရန်, အိန္ဒိယ၏ရှေးဟောင်းသင်ကြားမှုသံသယများနှင့် undependable ဖြစ်ဟန် ။ တဦးတည်းအနောက်နိုင်ငံများမှပြန်လည်ရောက်ရှိ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုရည်မှတ်: ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အမှန်တကယ်ဇစ်မြစ်နှင့်သမိုင်းကြောင်းထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကအလွန်ကျယ်ပြန်စာပေသွန်သင်ချက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မူလကဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်သောအရာကိုရှင်းပြရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ရာစုနှစ်များစွာထဲကစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အစောဆုံးကြိမ် မှစ. ဩဝါဒအများကြီးသင်ကြားမှုရှိခဲ့သည်; ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအရေးအသားများအမှန်တကယ်အစအဦးအတွက်ရည်ရွယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ရာတစ်ဦးအသိပညာပြသသောဆင်းလာကြပြီ။
အဆိုပါခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာပုံဥပမာများနှင့်စကား grandeur, ရိုးရှင်းခြင်း, အမှန်တရားရဲ့သက်သေအထောက်အထားသည်းခံကြ၏။ သို့သျောလညျးကိုတောင်သူတို့သည်အသစ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုပထမဦးဆုံးရသောအခှငျ့နားလည်ပြီဖို့မပေါ်လာ။ အဆိုပါစာအုပ်များလှည့်ဖြားရန်ရည်ရွယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်; ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရွေးကောက်အဘို့ဖြစ်၏သည့်အတွင်းစိတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိကွောငျးဖော်ပြ; လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုသင်ကြားမှုလူတိုင်းအတွက်ပေမယ့်အဘို့မဟုတ်ရည်ရွယ်စင်စစ်, စာစောင်နက်နဲသောအရာတို့ကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ် "အကြင်သူသည်ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ "; ထိုသို့သူတို့အနေနဲ့စတင်အနည်းငယ်မှလူသိများခဲ့ပါတယ်တဲ့သင်ကြားမှုရင်ခွင်ကြောင်းထင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခမညျးတျော, သားတော်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဤနက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။ နက်နဲသောအရာ, လွန်းသည်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအယူအဆနှင့်ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်အသက်တာဟူမူကား, ထိုနည်းတူသည်သူ၏ကားစင်တင်, သေခြင်းတရားနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ နက်နဲသောအရာ, ခြော, ကောင်းကင်နှင့်ငရဲနှင့်မာရ်နတ်နှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ပါ၏ ဤဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထက်သင်္ကေတအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ရမည်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ခဲဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်စာအုပ်တွေတစ်လျှောက်လုံးအတညျ့အလငျးစာသား, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲတစ်ဆန်းကြယ်မှုများသဘောအရလည်းယူခံရဖို့မရှိပါကြောင်းစာပိုဒ်တိုများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုရှိပါတယ်, နှင့်အခြားသူများကိုရှင်းလင်းစွာသာရွေးချယ်ထားသည့်အုပ်စုများမှအရေးပါမှုရှိနိုငျတယျ။ ထို့ပြင်၎င်းသည်ပုံဥပမာများနှင့်အံ့ဖွယ်အပကတိအမှန်တရားတွေအဖြစ် related ပြီနိုင်ကြောင်းဆိုပါစို့မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဘူး။ နက်နဲသောအရာတစ်လျှောက်လုံး-ပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာနက်နဲသောအရာထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနက်နဲသောအရာကဘာလဲ?
အဆိုပါခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အလွန်ထင်ရှားရည်ရွယ်ချက်တခုအတွင်းအသက်တာ၏နားလည်မှုနှင့်လူနေမှုသင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်; လူ့ခန္ဓာကိုယ်အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အားဖြင့်အသေသတ်ခြင်းကိုအောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအရာတခုအတွင်းပိုင်းဘဝကိုထာဝရအသက်ကိုရစေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ် restore ပြန်သောကြောင့်ပြိုလဲ-၎င်း၏ "ကျဆုံးခြင်း" ဖြစ်ခြင်းရှိသည်ဟုဆိုသည်သောအနေဖြင့်ပြည်နယ် "မူလအပွစျကို။ " အဲဒီမှာတစျခြိနျဆက်ဆက်ရပါမည် ဒါကြောင့်လုပ်နေတာကတဆင့်ဘယ်လိုတဦးတည်းအစွမ်းသတ္တိတဦးတည်းရဲ့အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်များ၏အသိပညာသို့ရောက်: တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအတွင်းပိုင်းဘဝအသက်ရှင်စေခြင်းငှါအတိအကျဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေလိုညွှန်ကြားချက်တစ်ဦးအဓိပ္ပါယ် system ကိုပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုသင်ကြားမှု၏တည်ရှိမှုလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်နက်နဲသောအရာမှကိုးကားခြင်းဖြင့်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်အရေးအသားအတွက်အကြံပြုသည်။ Home ပုံပြင်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများစကား, မျှသာကိုယ်ကျင့်တရားကိုမဥပမာများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသွန်သင်ချက်တွေကိုသယ်ဆောင်ဘို့ယာဉ်များအဖြစ်အမှုဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းညွှန်ကြားချက်တစ်ဦးနှင့်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အချို့သောအတွင်းထာဝရအမှန်တရားတွေ: ထို့အပြင်ကဥပမာရူပကတှေ, သုတ္တံစကားဖြစ်ကြောင်းသိသာပုံရသည်။ သူတို့ကယနေ့တည်ရှိအဖြစ်သို့သော်အဆိုပါခရစ်ဝင်ကျမ်း, စနစ်တစ်ခုရေးဆွဲရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသောဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့; အဘယ်အရာကိုငါတို့ရှိရာသို့ဆင်းသက်ထားပြီးမလုံလောကျပါပဲ။ နှင့်အညီ, ထိုကဲ့သို့သောသွန်သင်ချက်တွေကိုပါမယ်ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြရသောနက်နဲသောအရာအရာမှာ, အဘယ်သူမျှမလူသိများသော့ချက်သို့မဟုတ် code ကိုငါတို့သညျသူတို့သော့ဖွင့်သို့မဟုတ်ရှင်းပြမယ်အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခံရပြီ။
ကျနော်တို့ပေါလုသည်အသိသောအစောပိုင်းအယူဝါဒ၏ ablest ဆုံးနဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖှငျ့ဆို။ သူအသုံးပြုသောစကားသည်သူတို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြဘယ်သူကိုမှသူတို့အားမိမိအဓိပ်ပာယျကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဒါပေမယ့်ယခုသူ၏အရေးအသားများပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ "ဟုအဆိုပါကောရိန္သုပေါလု၏ပထမဦးစွာတမျးစာ," တဆယ်ငါးမျြးအခနျးကွီးမှ alludes နှင့်အချို့သောသှနျသငျ၏သတိပေး; တစ်ဦးအတွင်းပိုင်းအသက်တာ၏လူနေမှုရည်အချို့နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို။ ဒါပေမယ့်သူတို့အသွန်သင်ချက်တွေကိုအရေးအသား-သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ဆင်းလာကြပြီသောအရေးအသားများထဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ကြကြောင်းနားလည်-သို့မဟုတ်အခြားပေါ်လာမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားကြဘူးဖြစ်စေယူဆရမည်။ အားလုံးဖြစ်ရပ်များမှာ "ဟု The Way ကို" ကိုပြမထားပါ။
အဘယ်ကြောင့်အမှန်တရားတွေနက်နဲသောအရာ၏ပုံစံအတွက်ပေးထားကြသလဲ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကာလ၏ဥပဒေများအသစ်ကအယူဝါဒပြန့်ပွားတားမြစ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ရပြီပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါထူးဆန်းတဲ့သင်ကြားမှုသို့မဟုတ်ဩဝါဒပျံ့နှံ့နေတဲ့သေခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ပေးပါပြီနိုင်ဘူး။ အမှန်မှာထိုဒဏ္ဍာရီယရှေုသညျအမှနျတရားသင်ကြားမှုနှင့်လမ်းနှင့်အသက်အဘို့ကားစင်တင်အားဖြင့်သေခြင်းတရားခံစားခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကဆိုပါတယ်သို့သော်ယနေ့, လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသည်: တစျခုတစျသကျတာ၏နက်နဲသောအရာအရာမှာယုံကြည်သောသူအဘယ်သို့သောသေခြင်း၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖော်ပြလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုမည်သူမဆိုတခံပြီးမိမိကိုယ်မိမိနှင့်၎င်း၏အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်အကြားစပ်လျဉ်းကိုရည်မှတ်ခြင်း, knowledge- ဖို့လမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းကြစေခြင်းငှါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုလူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏က inhabits သောသတိမိမိကိုယ်ကို၏, အမှန်တရားသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်သို့မဟုတ်သိတယ် ဤအသော့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နားလည်မှုများအတွက်ကုဒ်လိုအပ်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏စကား, ယနေ့, မကွယ်ထားဖို့လိုပါမယ်။ ခေတ်သစ်ကာလ၌လူအပေါင်းတို့ "အရိပ်အမြွက်" နှင့် "လိုက်ကာ" အားလုံး "လျှို့ဝှက်ချက်များ" နှင့် "Initiative" အထူးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဘာသာစကားမှာ, အဝိဇ္ဇာ, အတ္တစိတ်, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းပေစွန်းစီးပှားရေး၏သက်သေသာဓကဖြစ်သင့်သည်။
အမှားတွေများနှင့်ကွဲပြားမှုနှင့်ဂိုဏျးဂဏကှဲသို့ရာတွင်; ယင်း၏ဆန်းကြယ်မှုများအယူဝါဒ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူတဲ့အကြီးအမျိုးစုံသျောလညျးခရစ်ယာန်ဘာသာရှိသမျှသောလောကီအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ အခြားမည်သည့်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုထက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီး၎င်း၏သွန်သင်ချက်တွေကိုကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ နီးပါးနှစ်ထောင်နှစ်ပေါင်း, လူ့စိတ်နှလုံးထဲသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုအတွက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နိုးသောသွန်သင်ချက်များတွင်အမှန်တရားတွေသို့သော်သူတို့ဝှက်ထားစေခြင်းငှါ, အဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။
နိစ္စထာဝရအမှန်တရားတွေလူ့အလောင်းတွေအားလုံးကိုကျင့်သောသူသာလျှင်၏စုစုပေါင်းသောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အတွက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အတွက်မွေးရာပါဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအမှန်တရားတွေနှိမ်နင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမေ့လျော့မရနိုင်ပါ။ ဘာပဲအသက်အရွယ်မှာတော့သမျှဒဿနသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၌, ထိုအမှန်တရားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံစံများကိုပြောင်းလဲသမျှပေါ်လာနဲ့ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီအမှန်တရားတွေအချို့ချပစ်ထားတဲ့အတွက်တဦးတည်းပုံစံ Freemasonry ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Mason အလို့ငှာလူသားမျိုးနွယ်အဖြစ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလှနျတနျဖိုး၏သွန်သင်ချက်ရှိပါတယ်; ဝေး သာ. ကြီးမြတ်, တကယ်တော့ထက်သူတို့ရဲ့ထိန်းသိမ်းသူ Mason အားဖြင့်တန်ဖိုးထားသည်။ အဆိုပါအမိန့်သတိရှိရှိသနေိုငျသောသူတဦးတည်းအဘို့ထာဝရကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆောက်အဦကိုရည်မှတ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအချက်အလက်များ၏ရှေးဟောင်း-bits ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဗဟိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဒရာမာဖကျြဆီးခံခဲ့ရသည့်ဗိမာနျတျော၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးပါသောဖြစ်ပါတယ်။ ဗိမာနျတျောယောက်ျားသည်နိစ္စထာဝရထာဝရဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့အသစ်တဖန်မွေးဖွား, ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရမည်ဖြစ်သောလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်၏ ထိုသတိရှိရှိသနေိုငျပြုသောများအတွက်လျောက်ပတ်ကျိန်းဝပ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်။ "ရှုံးနိမ့်" သောက "နှုတ်ကပတ်တော်ကို" က၎င်း၏လူ့ခန္ဓာကိုယ်-The တစ်ချိန်ကအလွန်ကြီးစွာသောဗိမာနျတျော၏အပျက်အယွင်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း, ကျင့်ရှိ၏ ဒါပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ် regenerated ကြောင့်ရသောကိုယ်နှိုက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်နှင့်ပြုသောကြောင့်ထိန်းချုပ်ကြာပါသည်။
ဤစာအုပ်သည်သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပေါ်တွင်သင်ပိုပြီးအလင်းပိုမိုအလင်းဘော်တတ်၏ ဘဝအားဖြင့်သင်တို့၏ "Way ကို" ကိုရှာဖွေ Light က။ ကတတ်၏သောအလင်း, သို့သော်, သဘောသဘာဝတစ်ဦးအလင်းမျှမက, ဒါကြောင့်အသစ်တခုအလင်းဖြစ်၏ အသစ်ကသင်နှင့်အတူတစ်ဦးရှိနေခြင်းခဲ့ပေမယ့်, သင်ကမသိကြလို့ပဲ။ ထိုအစာမကျြနှာ၌အတွင်းသိအလင်းချေါလျက်ရှိ၏ ဒါကြောင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည်သကဲ့သို့သငျသောအရာတို့ကိုပွသနိုငျသောအလင်းသည်ထောက်လှမ်းရေး၏အလင်းပေးသောသင်သည် related နေကြသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အတှေးအဖန်တီးခြင်းအတွက်စဉ်းစားနိုင်ကြသည်ကွောငျ့ဒီအလင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိ၏ သဘာဝတရား၏အရာဝတ္ထုရန်သင့်အားခညျြနှောငျဖို့, ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အလိုတော်အတိုင်း, သဘောသဘာဝတ္ထုကနေသင်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေရန်အကြံအစည်။ ရီးရဲလ်စဉ်းစားတွေးခေါ်အတှေးအချေါမြား၏ဘာသာရပ်အပေါ်အတွင်းသိအလင်း၏တည်ငြိမ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကံကြမ္မာကိုပါစေ။ ညာဘက်အတှေးအချေါကိုယ့်ကိုကိုယ်သိကျွမ်းဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသင်လမ်းကိုပြသနိုင်သည့်နှင့်မူသောသင်တို့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်သင်ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်, ထောက်လှမ်းရေး၏အလင်း, အတွင်းသိအလင်းဖြစ်၏။ နောက်ပိုင်းမှာအခန်းကြီးထဲမှာကဒီအလင်းကိုပိုမိုအလင်းရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသင့်ပုံကိုပြောပြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာအုပ်အတှေးအအစစ်အမှန်အရာတို့ကိုအစစ်အမှန်သတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။ လူကိုဖန်တီးပေးသောတစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်သောအရာတို့ကိုသူ၏အကြံအစည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်အတှေးအ created ထားတဲ့အားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုပြသ; များစွာသောအတှေးသူတို့ဖန်တီးထားသည့်မှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ထက် ပို. ကြာရှည်ခံဖြစ်ကြောင်း။ ဒါဟာအပြာထုတ်, အဒီဇိုင်းများသူသဘာဝတရား၏မကျြနှာကိုပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်လူနေမှုသူ၏လမ်းဟုခေါ်သောအရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီရာနှင့်အတူမြင်သာထင်သာပစ္စည်းအမှုအရာမှထွက်တည်ဆောက်ရာကနေမော်ဒယ်နဲ့သူ့လူထင်အကြံအစည်အလားအလာဖြစ်ကြောင်းပြသ လူ့ယဉ်ကျေးမှု။ အတှေးအရာထဲကနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ပျက်စီးရာပေါ်မှာစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်ပုံစံများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစာအုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာဘဝပြီးနောက်အသက်တာကိုတဆင့်သည်သူ၏ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးသည်မိမိတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုပေါင်းအသက်တာ၏ပြုမူသောအမှုနှင့်အတ္ထုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်လူကိုအပြင်ပန်း၏ပုံမမွငျအတှေးကရှင်းပြသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းလူကိုအတှေးကိုမပါဘဲစဉ်းစားရန်သင်ယူနှင့်အရှင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုဘယ်လိုပြသထားတယ်။
အသုံးအများဆုံးအဖြစ်စကားလုံးစိတ်ကိုသိမ်းကျုံး, စဉ်းစားတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလျှောက်ထားဖို့ကိုဖန်ဆင်းသော All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်လူတဦးတည်းသာစိတ်ထဲရှိကြောင်းယူဆနေသည်။ တကယ်တော့သုံးမျိုးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကွဲပြားစိတ်, သည်, သိအလင်းနှင့်အတူစဉ်းစားဘို့နည်းလမ်းတွေ, အခံပြီးပြုသောအသုံးပြုသောလျက်ရှိသည်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဤရွေ့ကား, နေသောခေါင်းစဉ်: ကိုယ်ခန္ဓာကို-စိတ်ခံစားချက်-စိတ်နှင့်အလိုဆန္ဒ-စိတ်ထဲ။ စိတ်ကိုအသိဉာဏ်-ကိစ္စများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစိတ်ကိုထို့ကြောင့်လွတ်လပ်စွာပြုသော၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမထားဘူး။ သုံးယောက်စိတ်တစ်ခုချင်းစီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ခံပြီးခံစားမှု-and ဆန္ဒ, ထိုပြုသောအပျေါမှီခိုသည်။
အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုလေ့စိတ်ကို, သို့မဟုတ်ဉာဏ်အဖြစ်၏စကားကိုအရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရပ်မှအဆိုပါလူ့ခန္ဓာကိုယ်စက်အော်ပရေတာများနှင့်ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုခေါ်တော်မူသည်နည်းတူ, ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏တစ်ပန်းအဖြစ်ခံစားမှု-and ဆန္ဒ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖို့ရည်ရွယ်တာနှင့်အတူနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အာရုံမှတဆင့်အဆင့်ပြုမူကြောင်းတည်းသောစိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကပြုသောမသိသည်နှင့်အပျေါ၌ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အတွင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏ဒီကိစ္စကိုတဆင့်ရသောအားဖွငျ့တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါခံစားချက်-စိတ်နှင့်ဆန္ဒ-စိတ်ထဲခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒမသက်ဆိုင်ဘဲမူလဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာနှင့် ဆက်စပ်. ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီနှစျခုစိတ်ထဲတွင်လုံးဝနီးပါးအတွင်းနစ်မြုပ်နှင့်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ် subordinated နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်လက်တွေ့အားလုံးလူ့စဉ်းစားတွေးခေါ်သဘောသဘာဝဖို့ပြုသောညျြမနှောနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှကွဲပြားတစ်ခုခုအဖြစ်သူ့ဟာသူ၎င်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ကာကွယ်ပေးသည်သောခန္ဓာကိုယ်-စိတ်အတှေးအချေါ, ရန်ကိုက်ညီစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့စိတ်ပညာသမုတ်သောတဲ့သိပ္ပံမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်သစ်စိတ်ပညာလူ့အပြုအမူ၏လေ့လာမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာလူ့ယန္တရားအပေါ်မှာအာရုံနှင့်အရှင်လက်ခံရရှိသောတွေ့ကြုံမှလူ့ယန္တရား၏တုန့်ပြန်ကတဆင့်လုပ်ကြသည်တ္ထုများနှင့်သဘာဝတရား၏တပ်ဖွဲ့များထံမှဆွဲဆောင်မှု၏လေ့လာမှုကြောင်းဆိုလိုတာခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စိတ်ပညာမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာ psyche ဖြစ်တယ်, ဘာစိတ်ထဲဖြစ်ပါတယ်နားလည်မှုအချို့ကြင်နာလည်းမရှိမှီတိုင်အောင်, သိပ္ပံအဖြစ်စိတ်ပညာမဆိုကြင်နာရှိတယ်မဖွစျနိုငျ; ဘယ်လိုစိတ်ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏, ထိုအကြောင်းတရားများနှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများရလဒ်များအတွေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတစ်သဘောပေါက်။ စိတ်ပညာရှင်သူတို့ကဤအမှုအရာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရဝန်ခံ။ စိတ်ပညာစစ်မှန်သောသိပ္ပံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှေ့တော်၌ထိုပြုသော၏သုံးစိတ်ထဲတွင်များ၏အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာအခြို့ကိုနားလည်မှုရှိရပါမည်။ ဒါကစိတ်နှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်သောသိပ္ပံဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့်အပေါ်မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစာမကျြနှာမှာတော့ကခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုတိုက်ရိုက်ယောက်ျားသည်အတွက်ခံစားမှုရှုထောင့်အလိုဆန္ဒနှင့်အလိုဆန္ဒရှုထောင့် feeling ကလွှမ်းမိုးနေသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်ကလွှမ်းမိုးကြောင်းရှင်းပြခြင်း, လေ့လာခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတာကိုဘယ်လိုပြသသည်, နှင့်သောကလူ့အတွင်းယခုကြီးစိုးခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသူတို့လည်ပတ်လျက်ရှိသောအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိင်အရသိရသည်ပိုပြီးနီးပါး attuned ဤအများ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားဖြစ်၏ ထိုသို့အားလုံးလူ့ဆက်ဆံရေးအချင်းချင်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲတွင်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအပျေါမှီခိုဖြစ်ကြောင်း, နောက်ထပ်, ပြသနေသည်။
ကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာယေဘုယျအားအသုံးပြုမှုအတွက်ခဲ့ပေမယ့်ခေတ်သစ်စိတ်ပညာရှင်, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမသုံးစွဲဖို့လိုလားကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်, ဘာသာရပ်၏သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုခိုင်လုံဖို့, လွန်းသံသယနှင့်ရှုပ်ထွေးလွန်းမရှင်းလင်းပါကအမှုကိုဆောင်ရွက်သောစိတ်ဝိညာဉ်သည်အဘယ်အရာသို့မဟုတ်ပါကဘာကိုရည်မှတ်ဆိုပါတယ်ထားပြီးသမျှသော, သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင်းကိုခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, စိတ်ပညာရှင်ထို့ကြောင့်သူတို့၏လေ့လာမှုဘာသာရပ်လူ့တိရိစ္ဆာန်စက်နှင့်၎င်း၏အပြုအမူအဖြစ်ယူကြပြီ။ "။ ကိုယျခန်ဓာ, ဝိညာဉ်, စိတ်ဝိညာဉ်" ဒါဟာတာရှည်ယေဘုယျအားဖြင့်, သို့သော်, သောလူသား၏ဖွင့်ထားမည်သူမျှခန္ဓာကိုယ်တိရစ္ဆာန်သက်ရှိကြောင်းသံသယလူများကနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သဘောတူညီခဲ့ထားပြီး; ဒါပေမဲ့ရည်, စိတ်, ဝိညာဉ်အများကြီးမသေချာမရေရာနဲ့ထင်ကြေးရှိခဲ့သည်။ ဤအအရေးပါသောအဘာသာရပ်များတွင်ဤစာအုပ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာအုပ်အသက်ရှင်သောဝိညာဉျသတစ်ခုအမှန်တကယ်နှင့်ပကတိတကယ်တော့ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ်၌ကြီးသောအရေးပါမှုဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်, ထိုသို့ indestructible ကြောင်း။ ဒါဟာကျဝိညာဉျကိုချေါခဲ့သသောအရာတစ်ဦးသဘောသဘာဝယူနစ်-တစ်ဦးကို elemental, Element တစ်ခုရဲ့တစ်ယူနစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်, နှင့်ဤသတိပေမယ့်သတိမရှိသော entity ပိုရောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်-up, အားလုံးကိုသဘောသဘာဝယူနစ်များ၏ချီတက်ကြောင်း: ကများပြားလှပြောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၌ရှည်လျားသောအလုပ်သင်ပြီးနောက်ကြောင့် function ကိုမှတိုးတက်ဘဲလျက်ခန္ဓာကိုယ်အဖှဲ့အစညျးမှာအကြီးတန်းကို elemental ယူနစ်ဖြစ်ပါသည် သဘာဝပါဝင်။ အရှင်သဘောသဘာဝရဲ့ဥပဒေများအားလုံး၏ပေါင်းလဒ်ဖြစ်ခြင်း, ဒီယူနစ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ယန္တရားအတွက်သဘာဝတရား၏အလိုအလျှောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်ရှိ၏ အဆိုပါပြုသောရဲ့ကဆုံးဖြတ်ကဲ့သို့သောအဖြစ်ကအခါအားလျော်စွာသို့ရောက်ရန်ပြုသောအသစ်တစ်ခုဇာတိကိုယ်ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးပြုသော၏ကံကြမ္မာကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်အဘို့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်နေဖြင့်အားလုံး၎င်း၏ Re-တည်ရှိနေတဆင့်သနေိုငျပြုသောအမှုကိုဆောင်ရွက်သော စဉ်းစား။
ဤသည်ယူနစ်ထွက်သက်-form ကိုချေါဖြစ်ပါတယ်။ အသက်တော်-ပုံစံ၏တက်ကြွသောရှုထောင့်အသက်တော်သည် ဖြစ်. , အသက်တော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်, ဝိညာဉ်တော်သည်ဖြစ်၏ ဒါကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာစိမ်။ အသက်တော်-ပုံစံ၏အခြားရှုထောင့်က, passive ရှုထောင့်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသက်တော်၏အရေးယူမှုအားဖြင့်မြင်နိုင်, မြင်သာထင်သာတည်ရှိသို့ထွက်တည်ဆောက်အဆိုအရသောပုံစံသို့မဟုတ်မော်ဒယ်ပုံစံ, အမှိုဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံတည်ရှိသောအရှင်အသက်ရှု-ပုံစံနှစ်ခုရှုထောင့်, အသက်နှင့်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုသည်။
လူသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပါဝင်ပါသည်, ဝိညာဉ်, စိတ်ဝိညာဉ်အလွယ်တကူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်စုစုပေါင်းကိစ္စ၏ရေးစပ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဒါကြေညာချက်; ဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဘဝ, အသက်ရှင်ထွက်သက်တော်သည်အသက်၏သက်တော်ကြောင်း, နှင့်ဝိညာဉ်သည်မြင်နိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အတွင်းစိတ်သဏ္ဍာန်, အ imperishable မော်ဒယ်ကြောင်း, နှင့်အရှင်သည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါပုံစံသွင်းသွင်းသောအစဉ်မပြတ်အသက်ရှု-ပုံစံကြောင်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ယောက်ျား၏ဇာတိကိုယ်ခန္ဓာကို rebuilds ။
အသက်တော်-form ကို၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့အဆင့်ရှိထားတဲ့စိတ်ပညာအဆိုပါမသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ကိုချေါသဖြင့်, သတိလစ်မူကြောင်းကိုပါဝင်သည်။ ဒါဟာအတင်းအဓမ္မဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်စီမံခန့်ခွဲ။ ဤလုပျငနျးတှငျအဲဒါကိုသဘာဝထံမှလက်ခံရရှိသည့်ဆွဲဆောင်မှုအညီလည်ပတ်သော။ အဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတှေးအချေါသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်လည်း, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုထွက်သယ်ဆောင်။ ထိုသို့သဘာဝနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသနေိုငျဧည့အကြားကြားခံအဖြစ်လည်ပတ်သော; တစ်ဦး automaton ဆင်ကန်းတောတိုးသဘာဝအရာဝတ္ထုနှင့်တပ်ဖွဲ့များ၏ရိုက်ခတ်မှုများငှါ၎င်း, ပြုသော၏စဉ်းစားတွေးခေါ်တုံ့ပြန်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်စာသားသည်သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ကနျြးမာရေးကိုသို့မဟုတ်ရောဂါပြသခွေငျးငှါမည်သို့ပင်, သင်သည်သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်ခံစားချက်နှင့်ခွေငျးငှာအလိုရှိသောအားဖြင့်ဒါကြောင့်ပါစေ။ ဇာတိပကတိအားဖြင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ imperishable ဝိညာဉျသ, သင့်အသက်ရှု-ပုံစံတစ်ခုစကားရပ်ဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အရှင်အများအပြားဘဝသက်တမ်း၏အကြံအစည်တစ်ခုပြင်ပဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပစ္စုပ္ပန်အထိကျင့်အတိုင်းသင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်အကျင့်ဓလေ့တစ်ခုမြင်နိုင်စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်းနှင့်မဖောက်ပြန်၏ပိုးတည်ရှိသည်။
လူကိုတနေ့သတိမသေခြင်းမှီလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးအတွက်ဒါအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဘာမျှယနေ့ရှိ၏ သူကနောက်ဆုံးမှာသူမူလကပြုတ်ကျရာကနေစုံလင်တစ်ပြည်နယ်ပြန်လည်လိမ့်မည်။ ကွဲပြားပုံစံများအတွက်ထိုသို့သောသင်ကြားမှုနီးပါးနှစ်ထောင်နှစ်ပေါင်းအနောက်နိုင်ငံတွေမှာယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျင့်သောသူသာလျှင်သန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာ, ရာစုနှစ်မှတဆင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော Re-တည်ဆဲဒါကြောင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ပျံ့နှံ့လာခဲ့သောအခြိနျကာလအတှငျးတစ်ခုအတွင်း၌ဖမ်းမိအမှန်တရားအဖြစ်စိတ်ကူးနှင့်အတူမှုများထပ်တလဲလဲအဆက်အသွယ်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီ။ အဲဒီမှာကအနည်းငယ်သာနားလည်မှုနေဆဲဖြစ်ပြီး, နေဆဲလျော့နည်းပါကစဉ်းစားသော်လည်း, ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ယိုယွင်းပျက်စီးသော်လည်း; ကလျစ်လျူ, levity, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ကွောကျရှံ့နှင့်အတူယနေ့အမျိုးမျိုးမှတ်စေခြင်းငှါသော်လည်း, စိတ်ကူးပစ္စုပ္ပန်နေ့ကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အထွေထွေအတွေးပုံစံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်စဉ်းစားဟန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုက်သောဖြစ်ပါတယ်။
လုံလောက်အောင်အတွေးကသူတို့ကိုခံရပြီအထိဤစာအုပ်ထဲတွင်အခြို့သောထုတ်ပြန်ချက်များသို့သော်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်ပင်စိတ်ကူး, ထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ: လူ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မပျက်စီးနိုင်သောလုပ်စေခြင်းငှါစိတ်ကူးထာဝရ; regenerated နှင့်ပြုသောရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ကရြောကျစေရာမှစုံလင်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်တာကိုတစ်ပြည်နယ်ပြန်စေခြင်းငှါ, နှင့်နောက်ထပ်, စုံလင်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်ကိုကြောင်းပြည်နယ်တဦးတည်းအသက်ရှင်စဉ်မဟုတ်သေသောနောက်, မနီးမဝေးကွာအချို့ nebulous နောင်အတွက်, ဒါပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးထဲမှာရရှိခဲ့ခံရဖို့ကြောင်းကိုစိတ်ကူး။ ဤသည်အမှန်ပင်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လေ့လာတဲ့အခါမှာအသိဥာဏ်ကမိုဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်။
အဘယ်အရာကိုမိုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျား၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်သေရမည်ဖြစ်ပါသည်; နေဆဲပိုပြီးမိုကတစ်ဦးတည်းသာအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်နိုင်ကြောင်းသေဆုံးအားဖြင့်ကြောင်းအဆိုပြုပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်နှောင်းပိုင်းကသူတို့ကဒီလိုပြည့်စုံနိုင်ကိုဘယ်လိုအကြံပြုကြဘူးပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်, အသတ်မရှိတိုးချဲ့မဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်မလိုပါကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်ဆက်, လူ့အလောင်းတွေကိုအမြဲအသေသတ်ခြင်းကိုဘာသာရပ်ကြပြီ အဘယ်သူမျှမကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုသူတို့ကိုအသစ်တဖန်မွေးဖွားစေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒါပေမဲ့သူတို့ရိုးရှင်းစွာအသေခံ။ ဤစာအုပ်၌, အခန်းမဟာ Way ကိုအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ် regenerated နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားသည်ကိုစုံလင်တစ်ပြည်နယ်ပြန်နိုင်ပါတယ်နှင့်ပြည့်စုံ Triune ကိုယ်ပိုင်အဘို့အိမ်တော်ကိုလုပ်ရမည်။
လိင်ပါဝါလူကိုဖြေရှင်းပေးရမည်ဖြစ်သောအခြားနက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သင့်သည်။ အဲဒီအစားလူကိုအလွန်မကြာခဏထိုသို့သခင်ဘုရားနှင့်အတူသူမလွတ်မြောက်နိုင်သည့်အနေဖြင့်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပါတယ်သူ၏ရန်သူသည်, မိမိမာရ်နတ်စေသည်။ ဤစာအုပ်ကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်ကောင်းသောအရာအဘို့ကြီးသောတန်ခိုးအဖြစ်အသုံးပြုရန်ရန်, စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုပြသ; နှင့်မည်သို့နားလည်မှုနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုများကခန္ဓာကိုယ်အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်း၏အစဉ်အဆက်တိုးတက်သောဒီဂရီအတွက်တဦးတည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စံနမူနာပြီးမြောက်ရန်။
တိုင်းလူသားတစ်ဦးကို double နက်နဲသောအရာဟူမူကား, ။ ကိုယ်တော်တိုင်၏နက်နဲသောအရာကို, သူသည်၌တည်ရှိ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏နက်နဲသောအရာကိုသူကနှစ်ဆနက်နဲသောအရာမှသော့ခတ်နှင့်အဓိကရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်သော့ခတ်သည်, သူသည်သော့ခတ်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာအုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏နက်နဲသောအရာကိုမှတံခါးသော့ကိုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သင်မည်သို့ပြောပြရန်ဖြစ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဘယ်လို; ကိုယ်ပိုင်အသိပညာအဖြစ်သင့်အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေသိရန်ပုံ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောသော့ခတ်ဖွင့်ဖို့သော့ခအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးဖို့ဘယ်လို; နှင့်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတဆင့်ဘယ်လိုသဘာဝတရား၏နက်နဲသောအရာနားလည်ပြီးသိရန်။ သင်၌ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျသဘာဝတရား၏တစ်ဦးချင်းစီကိုယျခန်ဓာစက်၏အော်ပရေတာဟူမူကား, ဒါကြောင့်ပြုမူခြင်းနှင့်နှင့်သဘောသဘာဝနှင့်စပ်လျဉ်းဓါတ်ပြုပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသိပညာနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စက်၏အော်ပရေတာများ၏ပြုသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ, သင်တစ်ဦးချင်းစီကိုအသေးစိတ် In-သိရကြလိမ့်မည်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူနစ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာသဘာဝတရား၏ဥပဒေများဖြစ်ကြောင်းလုံးဝ-သော။ သငျသညျထို့နောက်လူသိများအဖြစ်သဘာဝတရား၏အမျိုးအမည်မသိဥပဒေများကိုသိ, သင်နေသော၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီကိုယျခန်ဓာစက်ကနေတဆင့်အကြီးအသဘောသဘာဝစက်နဲ့အညီလုပ်ကိုင်ဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုသာမန်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်အစဉ်အဆက်ပစ္စုပ္ပန်၏, သေးတဦးတည်းကစဉ်းစားနှင့်တကယ့်သည်ကကျွမ်းတဝင်မရှိသော, စိတ္တဇဖြစ်လာဘယ်အရာကိုပြောပြရန်ကြိုးစားသောအခါ, ဒါကြောင့်တဦးတည်းကနားလညျဖို့ပျက်ကွက်, ကျင်းပမရနိုငျ; ထိုသို့ eludes လှနှင့်တဦးတည်းကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကရှင်းပြခဲ့ရသေးပါ။
အချိန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းအတွက်ယူနစ်, ဒါမှမဟုတ်ယူနစ်ထု၏ပြောင်းလဲမှုသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နေရာတိုင်းသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခွအေနေအောက်မှာသက်ဆိုင်ပေမယ့်တဦးတည်းကနားလည်နိုင်မီကစဉ်းစားခြင်းနှင့်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်နေစဉ်ပြုသော, နိုးအချိန်နားလည်ရပေမည်။ အချိန်ကတခြားကမ္ဘာနှင့်ပြည်နယ်များရှိကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဆိုပါသတိပြုသောအချိန်အိပ်မက်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းရှိနေစဉ်, ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကွယ်လွန်သောအခါ, ဒါမှမဟုတ်အပြီးသေခြင်းပြည်နယ်များဖြတ်သန်းနေချိန်တွင်, ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အဦးများနှင့်များ၏ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းစဉ်အဖြစ်နိုးနေစဉ်အတူတူပင်ဖြစ်ဖို့မပုံပေါ် အသစ်ကခန္ဓာကိုယ်ကမွကွေီးပျေါမှာကိုအမွေခံရကြလိမ့်မည်။ ဤအအချိန်ကာလကိုတစျဦးစီတစ်ဦးက "အစအဦး၌," ဟုဆက်ခံနှင့်အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ အချိန်ကလေးဘဝအတွက်တွားလူငယ်အတွက် run နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုယ်ခန္ဓာ၏မသေမှီတိုင်အောင်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်အတွက်ပြိုင်ပွဲပုံရသည်။
အချိန်ထာဝရထံမှပြောင်းလဲနေတဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှယက်, ပြောင်းလဲမှုဝဘ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝဘ်ယက်ထားတဲ့အပေါ်ရက်ကန်းစင်ထွက်သက်-ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုရက်ကန်းစင်, ဝဘ်၏တိုးတက်မှုနှုန်း, နှင့် "အတိတ်" သို့မဟုတ် "ပစ္စုပ္ပန်" သို့မဟုတ် "အနာဂတ်" ဟုခေါ်ကုလားကာရက်ကန်း၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်အချိန်ရက်ကန်းစင်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်စဉ်းစားတွေးခေါ်အချိန်၏ကုလားကာအသင်းသားများ, အချိန်၏ဝဘ် spins; နှင့်ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုအတှေးအချေါပါဘူး။
ဝိညာဏ်အပေါင်းတို့, နက်နဲသောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အများဆုံးလေးနက်တဲ့အခြားနက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစကားလုံးသိစိတ်ကိုထူးခြားသောဖြစ်၏ ကစတင်သုံးစွဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်၏ ယင်း၏ညီမျှသောအခြားဘာသာစကားများဖြင့်ပေါ်လာပါဘူး။ ၎င်း၏ All-အရေးကြီးသောတန်ဖိုးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုသို့သော်တန်ဖိုးထားကြသည်မဟုတ်။ ဒါကစကားလုံးအစေခံရန်ဖန်ဆင်းသောအသုံးပြုမှုတွင်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မည်။ ယင်း၏အလွဲသုံးစားလုပ်အချို့ဘုံဥပမာပေးရ: ဒါဟာ ", ငါ၏ဝိညာဏ် 'ကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများကိုမကြားရနှင့်" တဦးတည်းရဲ့သိစိတ် "သည်, ဒီလိုတိရိစ္ဆာန်ဝိညာဏ်, လူ့ဝိညာဏ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အဘိဥာဏ်, နတ်မင်းကြီးနှင့်ဝိညာဏ်၏အခြားမျိုးအဖြစ်၌တည်၏။ ထိုသို့ပုံမှန်ဝိညာဏ်အဖြစ်ဖော်ပြနှင့် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်, အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်, ဝိညာဏ်သည်, နှင့်အပြည့်အဝနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသတိ။ ဖော်ပြထားခြင်းလည်းသတိ၏စများကြားလျှင်, ဝိညာဏ်၏ပြောင်းလဲမှုသည်။ တဦးတည်းကလူသူတို့တစ်တွေကြီးထွားမှု, သို့မဟုတ်တစ်ခု extension ကို, ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဏ်တစ်ခုတိုးချဲ့, ကြုံတွေ့သို့မဟုတ်စေပြီဟုပြောကြား။ နှုတ်ကပတ်တရား၏တစ်ဦးကအလွန်ဘုံအလွဲသုံးစားလုပ်ကဲ့သို့သောစာပိုဒ်တိုများအတွက်ဖြစ်ပါသည်: ဝိညာဏ်မှကိုင်ထားရန်, ဝိညာဏ်ဆုံးရှုံးဖို့, , ပြန်လည်သုံးစွဲဖို့, ဝိညာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။ တဦးတယောက်တည်းအမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များနှင့်လေယာဉ်နှင့်ဒီဂရီနှင့်ဝိညာဏ်၏အခွအေန၏နောက်ထပ်, ကြား။ ဝိညာဏ်ကန့်သတ်, အရှင်အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်လွန်းသည်ကြီး, ဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော။ , ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်အတွက်မသိဖြစ်ရှင်းပြရန်: ။ သတိဖြစ်ပါသည်သမျှအချို့သောအမှုအရာမသိ, သို့မဟုတ်ပါကကဘာလဲဆိုတာအဖြစ်လည်းကောင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်အချို့အတွက်သတိဖြစ်ပါသည်ဤအချက်ကိုအဘို့နှင့် ပတ်သက်. ထဲကဒီစာအုပ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအသုံးပြု သတိဖြစ်ခြင်း၏ဒီဂရီ။
သတိအဆုံးစွန်, နောက်ဆုံး Reality ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပေးသော၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အားလုံးနက်နဲသောအရာတို့ကိုနက်နဲသောအရာ, ကသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကသာမရှိရင်ဘာမျှမသိနိုင်ပါတယ်; အဘယ်သူမျှမထင်နိုင်, အဘယ်သူမျှမဖြစ်ခြင်းမရှိ, entity မရှိအင်အားသုံးမရှိယူနစ်, မည်သည့် function ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသိစိတ်ကိုကိုယ်နှိုက်ကအဘယ်သူမျှမ function ကိုဆောင်ရွက်: ကမဆိုလမ်းထဲမှာပြုမူပါဘူး; ကနေရာတိုင်း, တစ်ဦးရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူတို့မသိသမျှဒီဂရီအတွက်သတိဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဏ်အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါဟာပြောင်းရွေ့သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ဘာမှမကြောင့်ထိခိုက်မည်သည့်လမ်းအတွက်မရနိုင်ပါ။ ဝိညာဏ်ဘာမှ၏ရလဒ်မကဘာမှမအပေါ်မူတည်ပါဘူး။ ဒါဟာတိုးမြှင့သို့မဟုတ်နုတ်, တိုးချဲ့ရန်, တိုးချဲ့, စာချုပ်, ဒါမှမဟုတ်မပြောင်းပါဘူး, သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ခြားနားသည်။ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဒီဂရီသတိဖြစ်ခြင်းရှိပေမယ့်, သိစိတ်ကိုအဘယ်သူမျှမဒီဂရီရှိပါတယ်: အဘယ်သူမျှမလေယာဉ်မရှိ, ပြည်နယ်များ; အဆင့်, ကွဲပြားခြင်း, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်မျိုးမူကွဲမျှ; ဒါကြောင့်အပေါင်းတို့နှင့်အရာရာ၌တစ်ကမ္ဘာသဘောသဘာဝယူနစ်ကနေအဓိပတိထောက်လှမ်းရေးမှ, နေရာတိုင်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သတိမပါဂုဏ်သတ္တိများမရှိအရည်အသွေးတွေမရှိ attribute တွေရှိပါတယ်, ဝင်စားပါဘူး, ကသိမ်းယူမရနိုင်ပါ။ ဝိညာဏ်စတင်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှ; ဒါကြောင့်ဖြစ်ငြိမ်းမရပါဘူး။ ဝိညာဏ် IS ။
မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အသက်တာ၌သငျသညျ indefinably, ရှာကြံမျှော်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ သငျသညျရေးသငျသညျတတျနိုငျသလျှင်မူကားသင်သည်တာရှည်အရာများအတွက်, သငျသညျ, content တွေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုရှာဖွေခံစားရတယ်။ ကပ်ကာလအမှိန်အမှတ်တရများတက်မြင့်တက်; သူတို့သည်သင်၏မေ့လျော့အတိတ်၏ပစ္စုပ္ပန်ခံစားခကျြမြားဖွစျကွ၏ သူတို့အတှေ့အကွုံနှင့်လူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနတ္တနှင့်အခညျြးနှီး၏အစဉ်အဆက်-ကြိတ်ပြေးစက်တစ်ထပ်တလဲလဲကမ္ဘာ့ပင်ပန်းအတင်းအကျပ်။ သငျသညျမိတျဆှတှေအကြား, ကလေးများအသုံးပြုပုံလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွငျ့, မိသားစုနှင့်အတူကြောင့်ခံစားမှုကျေနပ်ဖို့ဆည်းကပ်ကြမည်အကြောင်း, သို့မဟုတ်, စီးပွားရေး, စည်းစိမ်ဥစ္စာ, စွန့်စားမှု, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ဘုန်းအာနုဘော်အခွင့်အာဏာများနှင့်အာဏာသို့မဟုတ်သင့်နှလုံး၏ဘာပဲသည်အခြားစူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောလျှို့ဝှက်ချက်သည်။ ဒါပေမယ့်အာရုံ၏ဘာမျှမတကယ်တောငျ့ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်သင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ-ဖြစ်ကြ၏တစ်ခုသတိရှိရှိသနေိုငျ Triune ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးပေမယ့်ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်လွန်ခဲ့တဲ့သင်, ခံစားချက်-and ဆန္ဒ, ထိုပြုသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်, သင့် Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်နဲ့ knower အစိတ်အပိုင်းများကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ သင့်ရဲ့ Triune ကိုယ်ပိုင်အချို့ကိုနားလည်မှုမပါဘဲ, သငျသညျ, သင့်တောငျ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားမလညျနိုငျသညျ, နှင့်သင့်ကိုဆုံးရှုံးခံ, ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်မှပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့်သင်သည်အချိန်များတွင်အထီးကျန်ခံစားရတယ်ပါပြီ။ သင်မကြာခဏကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖြစ်ဤလောကအတွက်ကစားထားသောများစွာသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမေ့လျော့ပြီ သငျတို့သလည်းသင်အပြီးအပိုင်၏ဘုံ၌သင်တို့၏တွေးခေါ်နဲ့ knower နှင့်အတူနေချိန်မှာသတိခဲ့ကြသည်သောအစစ်အမှန်အလှအပနှင့်အာဏာမေ့လျော့ကြပြီ။ ကျင့်သည်အတိုင်း, ရှည်လျားပြီးပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ခံစားချက်-and ဆန္ဒ၏မျှတတဲ့ပြည်ထောင်စုအဘို့သင်တို့မူကား, သင်တို့ကိုတဖန်အပြီးအပိုင်၏ဘုံ၌, Triune ကိုယ်ပိုင်အတိုင်း, သင်တို့၏တွေးခေါ်နဲ့ knower အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်။ ရှေးခေတ်အရေးအသားခုနှစ်တွင်တဦးတည်းကျေနပ်မှုဖြစ်သည့်အတွက်ပြည်နယ်နှင့်ဘုံထဲကနေသကဲ့သို့ဤကဲ့သို့သောစာပိုဒ်တိုများအတွက်ထွက်ခွာသွားဖို့ allusions, "မူလအပွစျ", "လူသား၏ကျဆုံးခြင်း," အဲဒီမှာပါပွီ။ သငျသညျထှကျသှားရာမှပြည်နယ်နှင့်ဘုံဖြစ်ငြိမ်းမနိုင်, ဒါကြောင့်အသေကောင်အားဖြင့်အသေခံပြီးနောက်လူနေမှုအားဖြင့်ပြန်လည်ပေမယ့်မပေးနိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးတည်းခံစားရမလိုပေ။ သင့်ရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ knower သင်နှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ သမုဒ္ဒရာတွင်သို့မဟုတ်သစ်တောထဲတွင်တောင်ကြီးတောင်ငယ်သို့မဟုတ်လွင်ပြင်ပေါ်နေရောင်ခြည်သို့မဟုတ်အရိပ်ထဲမှာလူအစုအဝေး၌ဖြစ်စေအထီးထီးနေခြင်းကိုပြခြင်း, နေရာတိုင်းမှာသငျသညျ, သင့်ကိုတကယ်စဉ်းစားခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်သင်တို့နှင့်အတူဖြစ်ပါသည် သိ. နေကြသည်။ သင့်ရဲ့တကယ်ကိုယ်ပိုင်ယခုအချိန်အထိသင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ထားခံရဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကသင်သည်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ knower သို့သော်ရှည်လျားကြောင့်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေအတိုင်းလိုက်နာရန်သင့်အားယူစခွေငျးငှါနှင့် Triune ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သူတို့နှင့်အတူအိမ်တွင်သတိရှိရှိနောက်တဖန်မှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာ, အစဉ်အဆက်သင်၏အပြန်လာဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
သငျသညျမဖွစျပါမညျဒီအတောအတွင်းမှာ, သင်, ကိုယ်ပိုင်အသိပညာထက်လျော့နည်းဘာမှစိတ်ကျေနပ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်, ခံစားချက်-and ဆန္ဒအတိုင်း, သင်တို့၏ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တာဝန်ရှိပြုသောပါ၏ နှင့်သင်သည်သင်၏ကံကြမ္မာကိုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အရာ၌ခန့်ထားပြီအဘယ်အရာကိုမှသင်တို့ကိုအသက်ရှည်သမျှအတွေ့အကြုံများကိုသင်ပေးဖို့နေသောကွီးနှစျသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားသင်ခန်းစာများကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်ကဲ့သို့အများအပြားဘဝတွေကိုအဘို့အပယ်ကဤသင်ခန်းစာများကိုကျေးဇူးပြုပြီးထား, ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်မကြာမီသင်ဆုံးဖြတ်ရန်အဘို့အသငျသညျ-မညျဖွစျပါသညျအဖြစ်သူတို့ကိုလေ့လာသင်ယူမည် ဒါပေမယ့်အချိန်သင်တန်းတွင်သင်သည်ထိုသူတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ➔